YawNathan Zinyaw: November 2008
ဘီလီ ရဲ့ အိမ်ကလေး
ဘီလီ တယောက် ပရမ်းပတာ လှုပ်ခါရမ်းနေတဲ့ အလုံပိတ်ကုန်တင်ကား အသေးလေး ရဲ့ နောက်ခန်း မှာ ငိုက်မြည်းရင်းလိုက် ပါလာတယ်။ ကားကို မောင်းနေတာက သူ့ရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှုး စမစ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးက မိုးပျံတိုက်တွေရဲ့ မှန်ပြူတင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေ။ စမစ် ကတော့ လုပ်သက် ၁၀နှစ်ထက် မနည်းရှိပြီ။ ဘီလီကတော့ အလုပ်ဝင်တာ တပတ်ပဲရှိသေးတယ်။
သူကဒီအလုပ်ကို သဘောကျ၍ ဝင်လုပ်သည်မဟုတ်။ ငတ်၍လုပ်ရခြင်းဆို ပိုမှန်မည် အရင်က သူက နယူးယောက်မြို့ကြီးမှာနေသည် မဟုတ် နယူးယောက်ပြည်နယ်ထဲမှာပါတဲ့ အယ်ဘာနီမြို့က ဘီလီချက်မြုတ် မွေးရပ်နယ်။ ဒါဖြင့်ဘာလို့ နယူးယောက်မြို့ကြီး မှာ အလုပ်လာလုပ်နေပါသလဲဟုသော မေးခွန်းကို ဘီလီ အားမေးလျှင် သူမဖြေချင်ဆုံး မေးခွန်းကိုမှ အလိုက်မသိ မေးခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ဘီလီ ငိုက်မြည်းရာက သူ့မျက်လုံးတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း ကားပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို လှမ်းကြည့် လိုက်တယ်။ နယူးယောက်မြို့ရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာကားတွေ၊ လူတွေ ရှုပ်ရှက်ခက်နေသည်။ တိုက်တွေက ပြွတ်ကျပ်ညှပ်သပ် မီးပွိုင့်စိမ်းနေတာတောင် လမ်းကို အလျင်စလိုဖြတ်ကူးနေတဲ့လူတွေက လှစ်ကနဲလှစ်ကနဲ။ ဒီကြားထဲ အဌားယာဉ် တွေက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဟွန်းတွေ တီးလိုတီး ကားတစ်စီးနဲ့ တစ်စီးကြားထဲ ဖြတ်ကျော်တက်။
စိုက်ကြည့်နေရင်း ရုတ်ခြင်း သူ့မျက်လုံးတွေကို ကယောင်ကတမ်းပိတ်လိုက်မိတယ်။ သူမျက်လုံးတွေထဲမှာ အရာဝတ္ထုတွေက ပုံသဏ္ဍန်မသဲကွဲတော့ဘူး အလင်းရောင်တွေ၊ မဲမဲ အရိပ်တွေ၊ လူတွေဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီအရောင်တွေ ဒါတွေပဲမြင်တော့တယ်။ မျက်လုံးထဲ ယိမ်းးထိုးနေတဲ့ အရိပ်တွေပျောက်အောင် သူ့မျက်လုံး တွေကို မှိတ်ထားလိုက်ရင်း ကိုင်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်ကို တကျိုက်မော့သောက် လိုက်တယ်။
ကားကတော့ ဆက်သွားနေဆဲ။ ကွေ့လိုက်ရပ်လိုက်၊ အရှိန်မြှင့်မောင်းလိုက် နှေးသွားလိုက်နဲ့ တော်တော်ကြာ မောင်းပြီးတော့မှ ကားကရပ်တန့်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ ကားနောက် တံခါးကို စမစ်က လာဖွင့်တယ်။ နောက်ခန်း တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မျက်လုံးထဲတမ်းဝင်လာလို့ ဘီလီ သူ့မျက်လုံးတွေကို လက်နဲ့ကာ ထားလိုက်တယ်။
“ဆင်းတော့လေ ကိုယ့်လူ ရောက်ပြီ …..အောင်မယ် မောင်ရင် က နောက်ခန်းထဲ အိပ်ပျော်လာသကိုး” ကြီးကြပ်ရေးမှုးစမစ် က သူကိုနောက်လိုက်တယ်။
ဘီလီကတော့ ခုနက အမြင်အာရုံမသဲကွဲတာရော နောက်ခန်းထဲ မှာ တော်တော်ကြာကြာ ထိုင်နေတာရောကြောင့် သူ့မျက်လုံးတွေက အလင်းရောင်ကိုတောင် ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခနကြာတော့ မျက်လုံးတွေကျင့်သားရသွားတော့မှ စမစ်ကိုရှာလိုက်တော့ သူတုိ့အလုပ်လုပ်ရမဲ့ တိုက်ရှိရာစင်ဝင်အောက်ကို စာရွက်တရွက် ကိုင်ပြီးတော့ သွားနေတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ အလုပ်စဖို့တိုက်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သွားတွေ့ တာဖြစ်မယ်။
ဒီ ၈၇လမ်း၊ ၈၆လမ်းဆိုတဲ့နေရာတွေက လူကုံတန်တွေ နေတဲ့နေရာ နယူးယောက်မြို့ မက်ဟန်တန်အပိုင်းမှာတော့ သူဌေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်။ ခြံတွေဝင်းတွေနဲ့တော့ မဟုတ် ကွန်ဒိုမီနီယန် တိုက် တွေ ဒါမှမဟုတ် စစ်ပြီးခေတ်က ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိုက်တွေ။ မိုးပျံတိုက်တွေလောက်တော့ မမြင့်။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ၁၀ ထပ်၊ ၁၅ ထပ်လောက်တော့ရှိသည်သာ။
ဒီလို အလုပ်မျိုး သူ့တသက် လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ ဘီလီ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးမိ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်အထိက ဘီလီ အတွက် သာသာယာယာပဲရှိသေးတယ်။ ဘီလီ ဘဝအစ က မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ မိဘတွေဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ ယနေ့အထိမသိ။ သူ့ကိုအဝေးပြေး ကားရပ်နားတဲ့ နေရာတခုမှာ လူတယောက်က တွေ့ခဲ့ပြီး မိဘမဲ့ဂေဟာကို ပို့ပေးခဲ့ခြင်း။ သူက ဥာဏ်ရည်လည်းနိမ့်ပါးတယ်ဆိုတော့ ဒီ အလယ်တန်း ပညာကိုပြီး အောင်သင်နိုင်တာကိုပဲ ဂေဟာက ဆရာမတွေက ဝမ်းသာလှပြီ။
အလယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ ဘီလီ အလုပ်စရှာတယ် ဘဝအတွက် အာမခံချက်ရှိမဲ့ အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ချင်ပေမဲ့ သူ့မှာ အတန်းပညာကလည်း မရှိတော့ အလုပ်တခုရဖို့ အတော့်ကိုခက်ခဲရှာခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂေဟာက ဆရာမကြီးကောင်းမှုနဲ့ ဘီလီ မွေ့ရာတွေ ချုပ်တဲ့ စက်ရုံကြီးမှာအလုပ်ရတယ်။
ပထမတော့ သူ့ အလုပ်က ချုပ်ပြီးလို့ပါကင်ပိတ်ပြီးသား မွေ့ရာတွေကို ဘီလီတို့လို အလုပ်သမားတွေက သုံးခု တစည်းဖြစ်အောင်တွဲပြီး သစ်သားပြားတွေပေါ် တင်ထားပေးတယ်။ ဒါကိုမှ ဖော့ခ်ကလစ် (forklift) မောင်းတဲ့ သူတွေက သယ်ပြီး ကုန်လှောင်ရုံထဲကိုပို့တယ်။ အဲဒီ ဌာနမှာ တနှစ်လုပ်ပြီးတော့မှ ဘီလီ ချုပ်ပြီးသား မွေ့ရာတွေ ကို ပါကင်ပိတ်တဲ့ ဌာန ဘက်ကိုပြောင်းရတယ်။ သူရာထူးတိုးသွားတဲ့ သဘောပေါ့လေ။
အဲဒီဌာနမှာ သူ့ဇနီးဖြစ်လာမဲ့ မန်ဒီ့ ကို စတွေ့တာပေါ့။ သူ့ဇနီးဖြစ်မဲ့ မန်ဒီ ကလည်းသူ့လိုပဲ မိဘမဲ့ ဥာဏ်ရည်နိမ့် သူတယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ သူမလေးမှာ တော်တဲ့ အရည်အချင်းလေးတခုကတော့ သူမကို တကယ်မေတ္တာရှိတဲ့ ဘီလီ့ လိုလူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။
တကယ်တော့ ဘီလီ က လူညံ့လေးတယောက် မိန်းကလေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာအတွေ့ အကြုံမှ ရှိဖူးတဲ့ ကောင်လေး မဟုတ်တော့။ မန်ဒီ့ကို အပြင်ခေါ်ပြီး ဒိတ်(Date) ဖို့ အတော်လေးကို အကျပ်ရိုက်ရတယ်။ စကားမရှိ စကားရှာပြီး မန်ဒီ့ နားမှာ တဝဲလည်လည်လုပ်နေတာကို အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေက သိတော့မှ။ ဘီလီကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော်နဲ့ ဟိုလိုပြော ဒီလိုပြော ဆိုပြီး ဆေးမှီးတိုတွေပေးတော့မှ ဘီလီ နဲ့ မန်ဒီ တို့ ဇာတ်လမ်းက စဖြစ်တော့တယ်။ ဒါတောင်မှ ပထမဆုံး အပြင်ခေါ်သွားတဲ့နေ့မှာ ဘီလီက မန်ဒီ့ အတွက် နှင်းဆီပန်းလေး ယူခဲ့ဖို့ မေ့လာသေးတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ဟာ ပထမတော့ ဘာစကားမှ မပြောပဲ ပလက်ဖေါင်းပေါ်နင်းလို့ ထွက်လာတဲ့ သူတို့ ခြေသံတွေ ကိုနားထောင်ရင်း လမ်းကိုဦးတည်ရာမဲ့ လျှောက်နေကြတယ်။ ခဏကြာတော့ မန်ဒီ က စိတ်မရှည်တော့ဘဲ……
“ဒီမှာ ကိုဘီလီ .. ရှင် ဒီအတိုင်းပဲ ဦးတည်ရာမဲ့ ဆက်လျှောက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမ အဆောင်ကိုပဲ ပြန်တာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်” လို့ပြောလိုက်တော့မှ ဘီလီလည်း မန်ဒီ့ လက်ကိုဆွဲပြီး အနီးပါးနားမှာ ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး တဆိုင်ကို ဝင်ထိုင်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ စားသောက်ဆိုင်လေးက အပြန်မှာတော့ ဘီလီက မန်ဒီ့ကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့တယ်။
နှင်းမှုန်မှုန်လေးကျနေတဲ့ ဇန်နဝါရီလကုန်ဆုံး ခါနီးညလေးတညမှာတော့ မန်ဒီ့ ဆီက အချစ်ကို ဘီလီရခဲ့တယ်။ သူ့ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့ ပါပဲ။ ဘီလီရော မန်ဒီပါ တွယ်တာစရာ ဆိုလို့ ဆွေမျိုးတဦးတလေ မှ မရှိတော့ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ အတော့် ကိုချစ်ကြတယ်။ ရဲဘော်ရဲဘက်၊ တိုင်ပင်ဖေါ်တိုင်ပင်ဖက်၊ သူတို့နှစ်ဦး ဟာ တယောက်ကို တယောက် မတွေ့ရရင် နေမထိ ထိုင်မသာကိုဖြစ်လို့။ မန်ဒီ့ ဆီက ချစ်အဖြေရပြီး နွေဦးပေါက်ရောက်တော့ သူတို့ နှစ်ဦး မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြတယ်။
ဘီလီ့ အတွက်လည်း အဲဒီနှစ်နွေရာသီ ဟာ စုတ်လည်းဝင် လာဘ်လည်းဝင်။ လက်ထပ်ပြီးမကြာမီမှာ ဘီလီ ပါပင်ဌာနမှာ ကြီးကြပ်ရေးမှုးရာထူး အဆင့်တိုးသွားတယ်။ အဲဒီတော့ အမေရိကန်တွေရဲ့ အိပ်မက်တခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရာနဲ့ နေထိုင်နိုင်ရေးဆိုတာကို ဘီလီ က အသေအချာမက်ပစ်လိုက်တော့တယ်။
ဘီလီ ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်လေးက ကုန်းမြင့်လေးပေါ်က အိမ်လေး။ အိမ်လေးက သိပ်မကျယ်လွန်း မကျဉ်းလွန်း မိသားစု တစု အတွက်တော့ နေလောက်အောင်ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်လေး။ ဘီလီကိုယ်တိုင် ဆေးအဖြူရောင်လေး ပြန်သုတ်ထားတယ် ။ အိမ်လေးရဲ့မျက်နှာစာ အဝင်လမ်း ဘေးတဖက်တချက်မှာ ပန်းပင်ရောင်စုံလေးတွေကို စိုက်ထားသေးတယ်။ ကုန်းဆင်ခြေလျောမြေနေရာလေးကိုတော့ မြက်ပင်စိမ်းတွေကိုလည်း စနစ်တကျ မွေးမြူထားသေးတယ်။ အဲဒီမြက်ခင်းလေးထဲမှာ ရေပန်းလေးတခု နဲ့ ရေကန်လေးတကန်ရှိတယ်။ ရေကန်ထဲမှာတော့ ဘီလီ့ အကြိုက် ရွှေငါးလေး တွေမွေးထားတယ်။ တောင်ကုန်းပေါ်ကအိမ်လေးကို မြင်လိုက်တဲ့သူမှန်သမျှ စိမ်းစိုလန်းဆန်းမှုကို ခံစားသွားရတာကြီးပဲ။
ဘီလီ ရော မန်ဒီ ပါ နှစ်ယောက်လုံးက မိဘမဲ့ဂေဟာတွေမှာ ကြီးပြင်းလာရတော့ မိသားစု အိမ်လေး ဆိုတာကို သူတို့ဘဝမှာ အလိုချင်ခဲ့ဆုံး။ ခုတော့ ဘီလီ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝခဲ့ပြီ။ သူ့ဘဝမှာ ကားနဲ့ အိမ်နဲ့ မယားအလှနဲ့။ နောက်တော့ ဘီလီတို့ အိမ်ထောင်မှာ သားလေးတယောက်တိုးပွားလာတယ်။ ဘီလီ ကတော့ အလုပ်ကို အရင်ထက် နှစ်ဆပိုလုပ်တယ်။ အချိန်ပိုတွေ ဆင်းတယ် သူများခွင့်ယူတယ် ဆိုလို့ ဘီလီ ကို အစားဝင်ခိုင်း ရင်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ လုပ်လိုက်တာပဲ။
အဲ အိမ်ထောင်သက် ၇ နှစ်ကြာတော့မှ ဘီလီ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တော့တာပဲ။ ဒီနှစ် အတွင်း အမေရိကမှာ စီးပွားရေးဆုတ်ကပ် ကြီးထဲမှာ ဘီလီတို့ စက်ရုံဟာလည်း စီးပွားရေးကျတဲ့အတွက် လူလျော့တဲ့ အထဲမှာ ဘီလီ ပါသွားတယ်။ အဲဒီ အချိန်နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မန်ဒီကလည်း အသည်းအသန် မမာဖြစ်တယ်။ ဘီလီ့မှာ အလုပ်ပြုတ်လို့ နောက် အလုပ်ရှာမယ်ကြံကာရှိသေး မန်ဒီက အပြင်းဖျားတော့ လူမမာ ကို ပြုစုရ၊ လူမမယ် သားလေးကို ထိမ်းကျောင်းရနဲ့ အတော့်ကို အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။
အဲ ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းက မပြီးသေးဘူး အကြွေးတွေက ပတ်လည်ဝိုင်းလို့နေတယ်။ အလုပ်ပြုတ်လို့ အလုပ်သမား နစ်နာကြေးတော့ ရပါရဲ့ ဒါကလည်း ပေးစရာရှိတဲ့ အိမ်ဖိုး၊ အကြွေးဝယ်ကတ်၊ ကားဖိုး၊ ဒါတွေအတွက်တော့ မလုံလောက်။ အိမ်ဖိုးမပေးနိုင်တာက ဘီလီ့ အတွက် အကြီးမားဆုံးပြဿနာ။ သူတို့မြို့မှာက စက်ရုံတွေများတော့ စက်ရုံတွေရပ်ရင် လူတွေလည်းစက်ရုံတွေနဲ့ အတူတူ အလုပ်နားလိုက်ရတာပဲ။ တခုပဲရှိတယ် မရပ်နိုင်တာက ဘီလီတို့ လို အလုပ်လက်မဲ့တွေ ခံစားနေရတဲ့ သောကတွေ။
သူ့ အတွက်တော့ မနက်ဆို အလုပ်ရှာထွက်မယ် ညနေခင်းဆို အလုပ်မရလို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီးပြန်လာမယ်။ လက်ထဲမှာလည်း အမြဲ ပုလင်းတလုံးပါလာမယ်။ ညဆိုမူးမယ် ဒါကလည်း သူခံစားနေရတဲ့ ပူပင်သောကတွေကို ခဏတာတော့ ဖျောက်ဖျက်နိုင်ကောင်းမယ်လို့ သူထင်လို့ပဲ။ အဲလိုနဲ့ နေလာတာ ဘီလီတယောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်တာ ၅လ လောက်ရှိလာပြီ စုထားဆောင်းထားတာလေးတွေလည်း အိမ်ဖိုးပေးရတာနဲ့ လုံးပါးပါးလာပြီ။ အခုချိန်အထိ အလုပ်တခု မယ်မယ်ရရ မရသေး။ နောက်လ အိမ်ဖိုးငွေပေးဖို့တောင် လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံက မပြည့်ချင်တော့။ ဒီအိမ်လေးကိုတော့ သူအဆုံးမခံနိုင် အိမ်ဝယ်တာကြာပြီဆိုတော့ ကြွေးအပြည့် ဆပ်နိုင်ဖို့ သိပ်မလိုတော့။ ခုချိန်မှတော့ ပိုက်ဆံ မပေးနိုင်လို့ဆိုပြီး အိမ်လေးကို လက်မလွတ်လိုက်ချင်။ ဒီအိမ်လေးက သူ့ဘဝဆိုလည်း ဟုတ်တယ်၊ သူ့မိသားစုအိမ်လေးဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။
ဘီလီ့မှာ သောကတွေဝင်လာပြီး အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေများလာတယ်။ ညဦးပိုင်းမူးအောင် သောက်ထားတုန်း ခဏပဲ အိပ်ပျော်တယ်။ ညဉ့်လယ်လောက်ကျ့ နိုးလာပြီး မိုးလင်းတဲ့ အထိပြန်အိပ်မပျော်တော့။ မန်ဒီက ပြောတယ် ရှင်က အိပ်ပျော်နေလည်း ဂယောင်ကတမ်းနဲ့ ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်း မသိဘူးတဲ့။ သေချာတာ က သူဟာ သောကတွေကို အိပ်မက်ထဲထိ သယ်သွားမိတယ်ဆိုတာပဲ။ သူ့ကိုယ်သူ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ သူဟာ အရက်စွဲနေခဲ့ပြီ။
ဒီလိုအချိန်မှာပဲ နယူးယောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်မိရင်း မြို့ပေါ်မှာတော့ အလုပ်တခုမဟုတ်တခု ရနိုင်ကောင်းရဲ့ ဆိုပြီး သူ နယူးယောက်မြို့ပေါ်ကို တက်လာခဲ့တယ်။ သူနေထိုင်တဲ့မြို့မှာတော့ အလုပ်တွေရှားပါးစပြုနေပြီဆိုတော့ သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့။
ဘီလီ ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ယောက်ရက်ခပ် ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဘယ်သောအခါကမှ အိပ်မောကျခဲ့ဟန်မတူတဲ့ မြို့တော်ကြီး တခုထဲကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ သူ့လို အလယ်တန်းပညာပဲအောင်ထားတဲ့ သူတယောက်အတွက်တော့ မြို့တော်ကြီး က အနည်းဆုံး အလုပ်ကြမ်းတခုခုတော့ ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့သူတွေးထင်ထားတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ မိုးပျံတိုက်တွေရဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေသန့်ရှင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာသူအလုပ်ရခဲ့တယ်။
“ကဲ..ကိုယ့်လူ အလုပ်စလို့ရပြီဟေ့ …” ဘီလီ ပုခုံးကို စမစ် ပုတ်လိုက်တာဟာ သူ့ကိုိ အတိတ်က လှုပ်နိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။
ကားထဲက လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို သယ်ထုတ် စမစ် ခိုင်းတာတွေကို လုပ်ရင်းနဲ့ သူ အလုပ်ရှုပ်နေ တော့တယ်။ တကယ်တော့ တိုက်အထပ်အမြင့်တွေရဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ အန္တာရယ် အတော်များတယ်။ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်က ကြိုးနဲ့ ဆိုင်းချထားတဲ့ ပုခက်လိုမျိုး ခါးစောင်းလောက်မြင့်တဲ့ သံပိုက် တွေတန်းပြီး အကာရံသဘောလုပ်ထားတဲ့ အခင်းသာပါပြီး အမိုးမပါတဲ့ ၆ပေ လောက်ရှည်တဲ့ နေရာလေးကနေ ပြူတင်းပေါက်မှန်တွေကို ရေနဲ့ဆေး၊ ပြန်ခြောက်အောင်သုတ်၊ ပေါ်လစ်ပြန်တင်။ ဒါတွေအားလုံးကို လေဟာနယ်ထဲမှာ ကြိုးတန်းလန်းဆိုင်းထားတဲ့ ပုခက်စင်ပေါ်ကလုပ် ရတာဆိုတော့ လက်ဝင်လှတယ်။ ပုခက်က တခါတလေ လေနဲ့အတူ ယိမ်းထိုးနေတဲ့ အခါလည်းရှိသေးတယ်။
ခုလည်း ဘီလီနဲ့ စမစ်တို့ နှစ်ယောက် လုပ်ငန်းစဖို့ ခေါင်မိုးပေါ်ရောက်နေပြီး စမစ်က ပုခက်စင်နဲ့ ဆိုင်းထားတဲ့ ကြိုးတွေကို ခိုင်မခိုင် သေချာပြန်စစ်နေတယ်။ သူတို့ခါးတွေမှာလည်း အသက်ကယ်ကြိုးတွေကို ချည်လိုက်တယ်။ ပုခက်စင်ကတော့ လေထဲမှာ တန်းလန်းချလို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အားလုံးသေချာပြီဆိုတော့မှ ဘီလီတို့ နှစ်ယောက်သား ပုခက်ထဲကို ဝင်လိုက်ကြတယ်။
ညကသောက်ထားတာရော အိပ်မပျော်တဲ့အရှိန်နဲ့ပါ သူ့ခေါင်းထဲမှာ ရီတီတီဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘီလီက သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်မှုကို သူအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်သား ၁၀ ထပ် အမြင့်ကနေစပြီး သန့်ရှင်းရမှာ။ ဒီနေ့မှ ရာသီဥတုကလည်း အတော်လေး အပူချိန်မြင့်တယ် နွေဦးရောက်ပြီဆိုတော့ နေရဲ့ အရောင်ကစူးစူးရှရှ။ နွေဦးရဲ့ လေညှင်းလေးက ဘီလီ ပါးပြင်က ပါးသိုင်းမွေးတွေကို ကြည်စယ် ကလူပြုသွားတယ်။ သူတို့ရောက်နေတဲ့ ၁၀ ထပ်က မြေပြင်ထက် ၁၃၈ ပေလောက်မြင့်တဲ့နေရာ။ အလုပ်ကို လက်ကသာလုပ်နေတာ စိတ်ကတော့ သူ့ မိန်းမ မန်ဒီရယ် သူ့သားငယ်လေးဆီကို ပြန်ပြန်ရောက်နေတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ဖိုးငွေ ၊ ကြွေးများ၊ အိမ်လွမ်းတဲ့စိတ်။
သူ မှန်ပြူတင်းတွေ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ အထပ်က အခန်းထဲမှာ ကလေးမွေးကင်းစလေးရှိပုံရတယ်။ ကလေးလေး ငိုနေတဲ့ စူးစူးရှရှ အသံဟာ သူ့ အာရုံကို အနှောက်အယှက်ပေးလာတယ်။ ကလေးကလည်း မရပ်တန်းကို ဆက်တိုက်ငိုနေတော့တယ်။ လေပြင်းတချက် အဝေ့မှာ ပုခက်စင် ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ဘီလီ့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ မှန်သုတ်နေတဲ့ အဝတ်လေး လွင့်စင်ကျသွားတာကို သူ့မျက်လုံးတွေ က မြေပြင် အထိကြည့်မိ လိုက်တယ်။
ချက်ချင်းဆိုသလို သူ့မျက်လုံးထဲမှာ အမြင်အာရုံတွေ မသဲကွဲပဲ အရိပ်တွေယိမ်းထိုးနေတယ် သူ့မျက်လုံးတွေကို ယောင်ပြီးမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ ကလေးရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး အော်ငိုသံက လိုသည်ထက်ပိုပြီးကျယ်လောင်နေလို့ နားတွေကိုပါ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ခေါင်းထဲမှာ အရမ်းကိုက်ခဲလာတယ်။ ဘီလီ ဒူးထောက်ပြီး ထိုင်ချလိုက်တုန်းမှာ ဘေးနားက စမစ်ရဲ့ အသံတွေကိုကြားနေရတယ်။ လေကိုရူမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းကိုမော့လိုက်မှာ နေ့ခင်းနေရောင် စူးစူးဝါးဝါးက သူ့မျက်စိတွေကို ကန်းသွားစေတယ်။ အတင်းကြိုးစား ဖွင့်ကြည့်တော့ နဖူးကချွေးတွေက မျက်လုံးထဲကို ဝင်လာပြန်တယ်။ သူ သွေးရူးသွေးတမ်း နဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေလို့ ပုခက်စင်လေးဟာလည်း လေပေါ်မှာ ယိမ်းထိုးလို့နေတယ်။
နောက်ဆုံး သူသိလိုက်တာတော့ နားထဲမှာ လေတိုးသံကြီး ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြားလိုက် ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဖွဲနုအိပ်ကြီးတခု ပစ်ချလိုက်သလို မြေပြင်နဲ့ ရိုက်ခတ် လိုက်ရင်း တကိုယ်လုံး နာကျင်မှုတွေအတိုင်းဆမဲ့ခံစား လိုက်ရတော့တယ်။
အရိုးတွေအားလုံးကျိုးကျေပြီး ပျော့ဖတ်တခုလိုဖြစ်နေတဲ့ သွေးအိုင်ထဲကခန္ဓာကိုယ်တခုရဲ့ နားမှာ လူတွေဝိုင်းအုံနေ ရင်း တယောက်တပေါက်ပြောဆိုနေကျတယ်။ ဒီထဲမှာ လမ်းဘေး ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ အဖိုးအို နှစ်ဦးရဲ့ ငြင်းခုံတဲ့ အသံက စီစီညံနေတယ်။
“ခုန်ချလိုက်တာ မင်းမတွေ့ဘူးလား ..သူ့ကိုယ်သူသတ်သေတာနေမှာ”
“ ဟာ…. မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ် မင်းလည်းတွေ့ရဲ့သားနဲ့ ပြုတ်ကျလာတာကွ”
“ခုန်ချတာကွ… ” ……… ………. “မဟုတ်ဘူးဟေ့ ပြုတ်ကျတာပါလို့ပြောနေသားနဲ့ကွာ”
ရင်ခွဲရုံကားလာပြီး ပျော့ဖတ်ဖတ်ခန္ဓာကိုယ် ကို သယ်သွားပြီးတဲ့ အထိ သူတို့အငြင်းမရပ်နိုင်သေး။
ဘီလီ့ရဲ့ ဝိဥာဉ် ကတော့ သူ့ရဲ့ အိမ်လေးနဲ့ မိသားစုလေးရှိတဲ့မြို့လေးဆီကို အသော့နှင်နေလေပြီ။
ဘီလီသိရင် ဝမ်းသာမဲ့ နောက်အကြောင်း တခုရှိသေးတယ် အိမ်လေးကို သူ့အသက်အာမခံကြေးငွေနဲ့ အပြတ် ငွေချေလိုက်နိုင်လို့ မန်ဒီ နဲ့ သားလေး ဟာ သူသိပ်ချစ်တဲ့အိမ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၀၈
(ဓါတ်ပုံကို www.jeanccohn.com ယူပါသည်။)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 6:29 PM7comments
မတူးတူးသာ က Tag ထားတယ် အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကားတဲ့ ..ခက်ပြီ တော်တော်များများက အကြိုက်ဆုံးဖြစ် နေတော့ ရွေးရခက်နေတယ်။
ကာတွန်းကားတွေ ကြည့်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတွေ မှာ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင် စရိုက်တွေရှိတယ်လေ။ ကျမကတော့ အဲဒီ ဇာတ်ကောင်စရိုက်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာရော ကာတွန်းပုံလေး တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တာရောနဲ့ ကာတွန်းကားဆို မလွတ်တမ်းကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။
အရင်ကတော့ ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ဆိုတာ ကလေးများ အတွက်ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ယနေ့ခတ်မှာ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ကွန်ဖူးပင်ဒါ (Kung Fu Panda) ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဟာ Box Office မှတ်တမ်းမှာ စံချိန်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားဟာ တရုပ်ပြည်မကြီးတခု တည်းမှာ ယွန်ငွေ သန်း ၁၀၀ အမြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ကရတဲ့ အမြတ်ငွေ မပါသေးပါဘူး။
အကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာ အမြဲ မှတ်မှတ်ရရရှိတာကတော့ ရေသူမလေး(The Little Mermaid) ပါ။ ဒီကာတွန်း ရုပ်ရှင်လေးကို ထပ်ပြန်တလဲလဲ ကြည့်မိတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြိုက်တာအပြင် ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းများကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်မိလို့ပါ။ ရေသူမလေး ဇာတ်လမ်း မူကွဲတွေ နောက်ထပ်ထွက်ရှိလာပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ ကျမကြိုက်နှစ်သက်မိတာက ၁၉၈၉ ခုနှစ် မှာ ပထမဆုံး ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ပါ။
ဇာတ်လမ်းလေး ကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပြရရင်တော့ ရေအောက်ကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးတဲ့ ဘုရင်ကြီး (King Triton - Merman ရေသူထီးပေါ့) အဲဒီဘုရင်ကြီးမှာ သမီးတော် ၇ ယောက်အနက် သမီးအငယ်ဆုံး မင်းသမီးလေး ရေသူမလေး အာရီရယ် (Ariel) ဟာ လူသားတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာကို သွားရောက် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ သူမ မှာ အလွန် သာယာတဲ့ အသံလည်းရှိတယ်တဲ့။
တနေ့တော့ သူမရဲ့ အဖေါ်ငါးကလေး ဖလောင်ဒါ (Flounder) ဟာ ရေပြင်ထက်ကိုသွားရင်း ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောနဲ့ ခရီးထွက်လာတဲ့ မင်းသားလေး အဲရစ် (Eric) ကို ရေသူမလေး အာရီရယ်က မြင်မြင်ခြင်း ချစ်မိသွားရောတဲ့။ လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေ ကျလို့ သင်္ဘောမှောက်တော့ မင်းသားလေး အသက်ကို သူမက ကယ်ပေးခဲ့တယ်။
နောက်တော့ လူသားရဲ့ အသက်ကိုကယ်တာ ရေအောက်ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်တယ်ဆိုပြီး ဖခင်ဘုရင်ကြီးက စိတ်ဆိုးပြီး သူမရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ လူသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ သူမကို မလိုလားတဲ့ ပင်လယ်စုန်းမကြီး အာစူလာ (Ursula) က ရေသူမလေးကို လူအသွင်ဖန်ဆင်းပေးမယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ အသံကိုတော့ အလဲအလှယ်လုပ် တဲ့အနေနဲ့ စုန်းမကြီးကိုပေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ ၃ရက်အတွင်းမှာ မင်းသားလေးရဲ့ အချစ်စစ်နဲ့နမ်းတဲ့ အနမ်းကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင် ရေသူမလေး ဟာ လူသားသွင်နဲ့ အမြဲနေသွားနိုင်ပြီး စကားလည်းပြန်ပြောနိုင်မယ်တဲ့။
စုန်းမကြီးဟာ မင်းသားလေးက ရေသူမလေးကို မေတ္တာသက်ဝင်မသွားအောင် နည်းမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ အကောက်ကြံတော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စုန်းမကြီးလည်းသေ၊ မင်းသားလေးဆီကလည်း မေတ္တာစစ်နဲ့ အနမ်းတပွင့်ကိုရပြီးတော့ ရေသူမလေးလည်း မင်းသားလေးနဲ့ သက်ဆုံး တိုင်ပျော်ရွှင်စွာနေ ထိုင်သွားရောတဲ့။
ဒီကားထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကတော့ ပင်လယ်ဂဏန်းကြီး (Sebastian the Crab) ပါ သူက ဘုရင်ကြီးရဲ့ လူယုံတော်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ရေသူမလေးရဲ့ အထိမ်းတော်ကြီးလည်း ဖြစ်တယ် ။ ရေသူမလေးကိုလည်း ထိမ်းလို့မရ ဘုရင်ကြီးကိုလည်းကြောက်ရနဲ့ နှစ်ယောက်ကြားဗျာများ တဲ့ ဇာတ်ကောင် စရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဇာတ်အစအဆုံး အရေးပါတဲ့နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်သွားတယ်။
ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေ အတော်များများမှာ ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းတွေကို အသားပေးထည့်သွင်း ရိုက်ကူးလေ့ရှိတယ်။ အော်စကာဆု၊ ဂရမ်မီဆု၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု စတဲ့ဆုတွေ ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီရေသူမလေး ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဟာလည်း အော်စကာဆု ၂ဆု၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ၂ဆု၊ ဂရမ်မီဆု ၁ ဆု နဲ့ တခြား ဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့တွေကပေးတဲ့ ၅ဆု ကိုလည်း ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရရှိတဲ့ဆုအများဆုကတော့ အကောင်းဆုံး တေးဂီတ နဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်တေးဆု တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆုရရှိတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး “ရေအောက်ကမ္ဘာ” (Under the Sea) သီချင်း ကတော့ ကျမရဲ့အကြိုက်ဆုံးပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပင်လယ်ဂဏန်းကြီး (Sebastian) က ဒီသီချင်းကိုသီဆိုထားပါတယ်။ လူသားကမ္ဘာကို စိတ်မဝင်စားပါနဲ့ ဇာတိဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ရေအောက်ဟာ မင်းအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာ၊ အေးချမ်းဆုံး ဒေသပါ လို့ ရေသူမလေး ကို လူသားတွေရဲ့ဌာနေကို မသွားဖို့ ဆုံးမတားမြစ် တဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ပင်လယ်ဂဏန်းကြီး နေရာကတော့ ဆန်မြူရယ် ရိုက် (Samuel E. Wright) က အသံဖြင့်သရုပ်ဆောင် သီဆိုထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသံဝါကြီးဟာ အတော်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းအောင် ဒီသီချင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှပါတယ်။ “Under da Sea… Under…da .. Sea.. he… he…”
သီချင်းလေးက နားထောင် ကောင်းရုံတင်မကသေးပါဘူး ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ရေအောက်မှာ နေထိုင်တဲ့ သတ္တဝါလေးတွေကိုပါ တီးမှုတ်ကခုန်ခိုင်းထားတော့ ကြည့်ရတာ အတော်လေး စိတ်ကိုရွှင်လန်းစေ ပါတယ်။ မယုံရင် Youtube မှာတင်ထားတဲ့ သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာကြည့်ပါ။
ဒီသီချင်းလေးကို ဟာဝှက်တ် အက်ရှမန် (Howard Ashman) က စာသားရေးပေးပြီး အဲလန် မန်းကန် (Alan Menken) က တေးဂီတဖန်တီးထားပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဒီသီချင်းနဲ့ ဂရမ်မီဆုကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ဆွတ်ခူး ခဲ့ပါတယ်။
ကျမကတော့ ကာတွန်းတွေကိုလည်းကြိုက် ကာတွန်းကားတွေကိုလည်း နှစ်ချိုက်လွန်းသူမို့ ကာတွန်း DVD တွေကို စုဆောင်းချင်ပေမဲ့ အသက်ကြောင့် ဝယ်စုရမှာ နည်းနည်းရှက်သလိုဖြစ်တာနဲ့ အရင်က မစုဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ သမီးလေး ကာတွန်းကြည့်တတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ရင် သမီးလေးကို အကြောင်းပြု ပြီး ကာတွန်းကားတွေဝယ်စု ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
(TAG ယဉ်ကျေးမှုကိုသေချာနားမလည်သေးတော့ ဆက် TAG ရမှာကို မေ့ပြီး အပြင်သွားလိုက်တယ်။ လမ်းကျမှ .. ငါ ဘယ့်သူ့ကိုမှ ဆက်မ TAG မိပါလားလို့ ပြန်စဉ်းစားမိပြီး... ခု TAG တော့မယ်ဗျို့... ကာတွန်းပို့စ်လေးတွေတင်လေ့ ရှိတဲ့ ကိုဇာနည်ဝင်း၊ ကာတွန်းကြည့်မကြည့် မသိပေမဲ့ TAG ချင်လို့ကို TAG မဲ့ ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) နဲ့ comment လာရေးသွားတဲ့ ကိုလူလ တို့ကို လက်ဆင့်ကမ်း TAG လိုက်ချင်ပါတယ်။)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 2:31 PM4comments
ပြည်သူ့ ကဗျာဆရာကြီး ပက်ဗလို နီရူဒါ
ဝန်ခံခြင်း။ ။ကဗျာဆရာကြီး နီရူဒါ ရဲ့ ကဗျာရှည်တပုဒ်ကို ကိုအောင်သာငယ်ဘလော့မှာ ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် ကဗျာဆရာကြီးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး မွှေနှောက်ရှာဖွေရင်း တွေ့ရှိသမျှကို ဘာသာပြန်သိမ်းထားချင်တာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်သွားတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ Pablo Neruda Foundation ကနေယူထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကျပါဦး။
အေးစက်တဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်ကလေးမှာ……..သစ်မြစ်တွေကိုတောင် ငါချစ်တယ်။
တကယ်လို့ အကြိမ်ပေါင်း တထောင် သေလို့ရှိရင်………အဲဒီမှာပဲ ငါသေချင်တယ်။
တကယ်လို့ အကြိမ်ပေါင်း တထောင် ပြန်မွေးရင်လည်း……………..အဲဒီမှာပဲ ငါမွေးချင်တယ်။
ကဗျာဆရာကြီး ပက်ဗလို နီရူဒါ ကို ဂျူလိုင်လ ၁၂ ရက်၊ ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှာ ချီလီနိုင်ငံ၊ ပါရာမြို့ မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်ရင်းကတော့ နာဖာလီ ရီကာတို ဘာဆိုအေလ်တို (Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာများ၊ စာပေများ ကို ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကဗျာ ဆရာကြီး နီရူဒါ ဟာ ၂၀ ရာစု ခေတ်တခုလုံးရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး နဲ့ သြဇာအရှိဆုံး ကဗျာဆရာတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။
သူဟာ “Twenty poems of love and song of Despair” ကဲ့သို့သော ရာဂအသားပေး အချစ်ကဗျာများ၊ အိပ်မက်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ရေးဖွဲ့မှု ကဗျာများ “surrealism pomes” (၁၉၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ရေပန်းစားခဲ့ သော စာပေဝါဒ)၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကို ရေးဖွဲ့ရသော ကဗျာရှည်များ “Historical epic” နှင့် ဖုံးကွယ်မှုကင်းသော နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်းတို့ကို သူရဲ့ အမျိူးမျိူးသော ကိုယ်ပိုင် ရေးဟန်များ နဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့လို့ ထင်ရှားကျော်ကြားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆု ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုလံဘီယာ ဝတ္ထုရေးဆရာ မာကွီဇ် (Gabriel Garcia Marquez)က ကဗျာ ဆရာကြီး ပက်ဗလို နီရူဒါ ကို “ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးတို့အတွက် ၂၀ရာစုရဲ့ အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ” လို့တောင် ချီးမွမ်းပြောကြားလိုက်ပါသေးတယ်။
ကဗျာဆရာကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ သံတမန်ဆိုင်ရာ ရာထူးတာဝန်များဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရုံသာမက ချီလီနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယ်စားပြု ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်အမတ် တာဝန်ကိုပါ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ ပြင်းထန်သူ သမတ ဂုန်ဇာလီ ဗီဒီလာ (González Videla) အာဏာရရှိလာတဲ့နောက် ချီလီနိုင်ငံတွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို တရားမဝင်ဝါဒ အဖြစ်ကြောညာလိုက်ပြီး ကဗျာဆရာကြီး နီရူဒါ ကို ဝရမ်းထုတ်ခါ လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီး တအိမ်ကနေ တအိမ်ရွေ့ပြောင်းရင်း အဖမ်းမခံရအောင် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနေခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ အိမ်တအိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာ တစ်လတိတိ ပုန်းအောင်းနေထိုင် ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် တောင်တန်းများ ကိုဖြတ်ကျော်ကာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘက်သို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်များမကြာမီမှာတော့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ထောက်ခံသူ သမတ ဆာဗာဒေါ အယ်လန်ဒီ (Salvador Allende) ချီလီနိုင်ငံမှာ အာဏာရရှိလာပြီး ကဗျာဆရာ နီရူဒါ ဟာ သမတ နဲ့ အနီးကပ်အတူတွဲကာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နီရူဒါ အဖေဟာ ရထားလမ်း အလုပ်သမားတဦးဖြစ်ပြီး အမေကတော့ ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမေဟာ သူ့ကိုမွေးပြီး ၂ လအကြာမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သူ့မှာ အဖေတူအမေကွဲ ညီလေးတယောက်နဲ့ ညီမလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်။ သူ အဖေက သူကဗျာတွေ စာတွေရေးသားတာကို အားမပေးလို့ နီရူဒါ ဟာ သူ့ရဲ့ ကလောင်နာမည်ကို အမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ နာဖာလီ ဘာဆိုလ်အယ်တို အမည်မခံပဲ ပက်ဗလို နီရူဒါ ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဘဝရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီကလောင်အမည်ကို တရားဝင် အမည်အဖြစ်ပြောင်းလွဲခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ကဗျာကို ၁၀နှစ်သားအရွယ်ကလေးဘဝမှာထဲက စတင်ရေးသားခဲ့သူပါ။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ စကားပြေတပုဒ် ကို မြို့နယ်နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာမှာပထမဆုံး ဖေါ်ပြခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှစတင်ပြီး ကဗျာများ၊ စာများကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စန်တီရေဂိုမြို့ ရှိ ချီလီတက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းဆရာတယောက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ပြင်သစ်ဘာသာကို လေ့လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကျောင်းမပြီးခင်မှာပဲ ကျောင်းကထွက်ကာ အချိန်ပြည့် ကဗျာဆရာအဖြစ် အသက်မွေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၂၃ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ လင်္ကာရှည်ပေါင်းချုပ် “ဆည်းဆာ ရဲ့ စာမျက်နှာများ” (Book of Twilight) ကိုပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တနှစ် အကြာမှာ “ အချစ်ကဗျာ ၂၀ နှင့် တွယ်ရာမဲ့ တေးချင်း” ( Twenty love songs and Desperate Song) သူ၏ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝ အချစ်ဇာတ်လမ်းများကို အခြေခံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာများ ကိုဆက်တိုက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်နှစ်အုပ်စလုံးဟာ ဘာသာစကားပေါင်း များစွာ နဲ့ ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ရပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အနှပညာကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ “အချစ်ကဗျာ ၂၀ နှင့် တွယ်ရာမဲ့တေးချင်း” စာအုပ်ဟာ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်မျှ စာအုပ်သန်းပေါင်းများစွာ ရောင်းချခဲ့ရပြီး။ ကဗျာဆရာကြီး နီရူဒါ ကို ကမ္ဘာကျော်အောင်မြင်ထင်ရှားသူ ကဗျာဆရာတယောက်အဖြစ်ကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကဗျာပေါင်းချုပ် စာအုပ် ၄၀ ကျော်၊ ဘာသာပြန်စာအုပ်များ နှင့် ပြဇာတ်များကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ နိုင်ငံရေး အယူအဆ။
သူဟာ ချီလီနိုင်ငံတွင်းမှာရော နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာပါ အောင်မြင်တဲ့ ကဗျာဆရာ အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ငွေကြေး ကျပ်တည်းမှုကြောင့် ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ချီလီနိုင်ငံကခန့်အပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကောင်စစ်ဝန်ရာထူးကို လက်ခံပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှပြောင်းရွေ့ပြီး ကိုလံဘို၊ ဂျာဗား နဲ့ စင်ကာပူ စတဲ့ဒေသတွေမှာ ကောင်စစ်ဝန်ရာထူးကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီလို သံတမန်ရေးရာ အလုပ်တာဝန် ထမ်းရွက်စဉ် ကာလများမှာ ကဗျာပေါင်းများစွာကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီး၊ ကဗျာရေးဟန် ပုံစံအမျိုးမျိုးကို စမ်းသစ်တီတွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စမ်းသပ်မှုရဲ့ အောင်မြင်မှုအဖြစ် ပထမဆုံး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ရေးဖွဲ့ဟန်ဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာရှည် ပေါင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့ “Residencia en la tierra” ကိုရေးသားနိုင်ခဲ့ပြီး။ နောက်များမကြာမီမှာတော့ ကျော်ကြားတဲ့ ကဗျာရေးဟန်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
နီရူဒါ ဟာ အရှေ့ဖက်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ သံတမန်အရာရှိတာဝန် သက်တမ်းကုန်ဆုံးလို့ ချီလီနိုင်ငံကိုပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် စပိန်နိုင်ငံ ဗွန်နိုစိုက်ရက်စ်မြို့ နှင့် ဘာစီလိုနားမြို့တွေကို ပြောင်းရွေ့တာဝန်ပေးခြင်းခံရ ပြန်ပါတယ်။ သူတာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလမှာ စပိန်နိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အဲဒီကာလတွေမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုသက်ဝင်ယုံကြည်လာပြီး နောက်ပိုင်း ဘဝ တလျှောက်လုံး ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်သွားခဲ့တယ်။
သူဟာ အဲဒီခေတ် အခါက လက်ဝဲဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူပညာတတ်များနည်းတူ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ မှ ဂျိုးဇက်ဖ် စတာလင်(Joseph Stalin) ကို လေးစားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပြီး နာဇီဝါဒကိုလည်း ဆန့်ကျင်သူ တယောက် လည်းဖြစ်တယ်။ စတာလင်အကြောင်းရေးဖွဲ့တဲ့ ကဗျာများ CantoaStalingrado (1942) နဲ့ Nuevo canto de amoraStalingrado (1943) ကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာတော့ သူဟာ စတာလင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ စတာလင် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ အတွက် စတာလင် တမ်းချင်း အလင်္ကာ (Ode to Joseph Stalin) ကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။သူဟာ ဆိုဗီယက်အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင် လီနင် (Lenin) ကိုလည်း လေးစားသူ တယောက်ဖြစ်ပြီး။ လီနင် ဟာ ရာစုနှစ်တခုလုံးရဲ့ အတော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ဖြစ်တယ်လို့ သူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။
သူဟာ မတ်လ ၄ရက်၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ချီလီကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယ်စားပြု ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်အမတ် နေရာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး။ နောက် ၄လ အကြာမှာတော့ သူဟာ ချီလီကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ပါတီဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ သမတ ဂုန်ဇာလီ ဗီဒီလာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ရာမှာ နီရူဒါ ဟာ မဲဆွယ်ပွဲများရဲ့ မန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တယ်။ ချီလီလက်ဝဲယိမ်းပါတီတွေက သမတလောင်း ဗီဒီလာ ကိုထောက်ခံ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သမတ ဂုန်ဇာလီ ဗီဒီလာ ဟာ အာဏာရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဆန့်ကျင် လာတယ်။
နီရူဒါ ရဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘဝဟာ သတ္တုတွင်းအလုပ်သမားများရဲ့ သပိတ်ကို ထောက်ခံမှု နှင့် သမတ ကို သတ္တုတွင်းအလုပ်သမားများအား နှိပ်စက်ညှင်းပန်း ထောင်ချမှု တို့အတွက် ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ သမတဗီဒီလာ ဟာ နီရူဒါ ကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြီးဖမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ အပြင် ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုလည်း တရားမဝင်ပါတီ အဖြစ်ကြေညာခဲ့တယ်။ သူဟာ ချီလီနိုင်ငံအတွင်းမှာ ၁၃လကျော် ပုန်းအောင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီး။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ချီလီနိုင်ငံကနေ အိမ်နီးချင်း အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့ရတယ်။ ပြည်ပမှာ ၃နှစ်ကြာ တိမ်းရှောင်နေစဉ်ကာလများမှာ ဥရောပနိုင်ငံများ၊ တရုပ်၊ အိန္တိယ နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ တို့ကိုလှည့်လည်ခရီးသွားခဲ့တယ်။
တောင်အမေရိတိုက်ရှိ မက်ဆီကို နိုင်ငံမှာ နေထိုင်စဉ် “Canto General” ဟုခေါ်တဲ့ အပိုင်း၁၅ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ ကဗျာရှည်များ ကိုရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ် မက်ဆီကို နိုင်ငံမှာပဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်မှာ အပိုင်း၁၅ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ကဗျာရှည်ပေါင်း ၂၃၁ ပုဒ်ပါဝင်တယ်။ ကဗျာရှည် ၂၃၁ ပုဒ်ထဲက ၉ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ “Let the Woodcutter Awaken” ကို မြန်မာစာရေးဆရာ မြသန်းတင့်က “သစ်ခုတ်သမားနိုးကြားလော့” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကဗျာကို နီရူဒါ ဟာ တောင်အမေရိကတိုက်တနေရာမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာတော့ ချီလီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလွဲတွေဖြစ်ပြီး ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအားကောင်းလာ တဲ့နောက်မှာ နီရူဒါ ဟာ ချီလီနိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ အမိနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ သူဟာ ကမ္ဘာသိကျော်ကြားတဲ့ ကဗျာဆရာဘဝနဲ့ သံတမန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတာဝန်ယူခဲ့ပြန်တယ်။ သူဟာ စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်း ကျူးဘား၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ နဲ့ အမေရိကန်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ “Cuba Missile Crisis” ကျူးဘားနိုင်ငံညှုကလီးယားပြဿနာ အတွက် အမေရိကန်တို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်ကျူးကျော်စစ်ပွဲကိုလည်း အပြင်းထန်ဆုံး ရှုံချခဲ့ သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် CIA အဖွဲ့ရဲ့ အထူးစောင့်ကြည့်ခံရသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။ နီရူဒါ ဟာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် နိုဘယ်စာပေဆု အတွက်လျာထားခံခဲ့ရပြီး အမေရိကန်လက်အောက်ခံ ကွန်မြူနစ်ဆန်ကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ ကန့်ကွက်မှု ကြောင့် နိုဘယ်ဆုနဲ့ ဝေးခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ စာရေးဆရာများညီလာခံတက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားခံ ခဲ့ရပေမဲ့။ သူ့ကို ကွန်မြူနစ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ နီရူဒါ ဟာ အဲဒီခေတ်အခါက သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ လက်ဝဲယိမ်းပညာတတ်ကဗျာဆရာ တယောက်
သူ ၏ အချစ်။
အချစ်ကဗျာတွေ အရေးကောင်း အဖွဲ့ကောင်းတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးရဲ့ ဘဝမှာ ကိုယ်တွေ့အချစ်ဇာတ်လမ်းများစွာရှိခဲ့ ပါသေးတယ်။ သူဟာ သူ့ချစ်သူမိန်းမပျိူလေး တွေ ရဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့အချစ်ကဗျာများထဲမှာ ထည့်သွင်း ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
နီရူဒါ မြန်မာပြည်ကို သံတမန်ရာထူးဖြင့် သွားရောက်အမှုထမ်းရွက်ခဲ့စဉ်တုန်းက မြန်မာ အမျိူးသမီးတယောက် နဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ “Josie Bliss” လို့ အများကခေါ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို အမြဲဝတ်စားတတ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေး ကို နီရူဒါ က မြန်မာကျားသစ်မလေးလို့ ချစ်စနိုးနဲ့တင်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သူနဲ့ မြန်မာမိန်းမပျို တုိ့ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ မိန်းမပျိုလေးရဲ့ နီရူဒါအပေါ် သဝန်တိုမှုကြောင့်သွေးအေးခဲ့ရပါတယ်။ နီရူဒါ ဟာ သူ့ရဲ့ “အချစ်ကဗျာ ၂၀ ” ထဲမှာ အဲဒီ မိန်းမပျိုလေး အကြောင်းစပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကဗျာများ အထဲက “Tango del Viudo” ဟာလည်း တပုဒ်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၂၉ ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဇနီး မာရီယာ (Maria Antonieta Haagenar)ကို ဂျာဗား မှာတွေ့ခဲ့ပြီး။ ၁၉၃၀ ဒီဇင်ဘာလ မှာ သူမနဲ့ လက်ထပ် ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဇနီး မာရီယာ နဲ့ သမီးတယောက်ရှိခဲ့ပြီး နာဇီအုပ်စိုးတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ နီရူဒါ ဟာ သူ့ ပထမဇနီး နဲ့ တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးခင်မှာ စပိန်နိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း သူ့ထက် အသက် ၂၀နှစ် ကြီးတဲ့ အာဂျင်တီးနား အမျိုးသမီး ဒီလီယာ ကာရီလ် (Delia del Carril) နဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၆ မှာတော့ ပထမဇနီးကို ကွာရှင်းခဲ့ပြီးနောက် ကာရီလ် နဲ့ တရားဝင်လူသိရှင်ကြားတွဲခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၃ မှာတော့ ကာရီလ် နဲ့ တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ အဲဒီလက်ထပ်မှုကို ချီလီနိုင်ငံက တရားမဝင်ဘူးလို့ နောက်ပိုင်းကြေညာခဲ့တယ်။)
၁၉၅၁ ခုနှစ် ပါရီ ကို အသွားမှာ နောက်ဆုံးဇနီးဖြစ်လာမဲ့ ချီလီအဆိုတော် မာလ်တီဒယ် (Matilde Urrutia)နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုမိုခိုင်မြဲလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် မှာတော့ နီရူဒါ ဟာ ဒုတိယဇနီးသည်နဲ့ ပြတ်စဲခဲ့ပြီး မာလ်တီဒယ် နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ မာလ်တီဒယ် ကို တတိယ ဇနီးအဖြစ် တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကွယ်လွန်ချိန် ၁၉၇၃ ခုနှစ် အထိ တတိယဇနီးနှင့် အတူနေထိုင် သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်များ။
နီရူဒါ ဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာတော့ သူမျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုကို အတိုက်အခံများကြားထဲ မှ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို သူရဲ့ အတိတ်က စတာလင်ဝါဒထောက်ခံခဲ့မှု အပေါ်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကဗျာဆရာကြီး နီရူဒါ ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
ကဗျာဆရာကြီးဟာ သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ချီလီနိုင်ငံ၊ စန်တီရေဂိုမြို့ မှာ ၁၉၇၃၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသုဘ အခန်းအနားကိုလူပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အသုဘအခန်းအနားကနေ အစိုးရအပြောင်းအလွဲအတွက် ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ခဲ့လို့ ရဲများနဲ့ နှိမ်နင်းခဲ့ရပါတယ်။ ချီလီနိုင်ငံပြည်သူများဟာ ကမ္ဘာကျော်ကဗျာဆရာကြီး ပက်ဗလို နီရူဒါ အတွက် နမြောတသစွာ ငိုကြွေးခဲ့ ကျပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၀၈
ဘာသာပြန်ပြီးချိန် ညနေ ၆း၃၈ မိနစ်။
References : Pablo Neruda - Wikipida the free encyclopedia.
Pablo Neruda Foundation.
For Extra Reading: http://www.mizzimaburmese.com(ငြိမ်းဝေ-ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပေါ်မှာသူ့ဘဝစခဲ့ တယ်)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 7:01 PM 8 comments
“တောက်…”ဖိုးလုံး စိတ်ဆိုးဆိုး နဲ့ မြေကြီးကိုရှပ်ကန် လိုက်တော့ ဖုန်မှုန့်တွေ လေထဲမှာ ဝေ့ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ မနက်ကထည်းက ခုချိန်ထိ ဈေးဦးမှ မပေါက်သေး။ ဝိုင်းစိန် နဲ့ ပူစူးမ က ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဖိုးလုံးကို စိတ်မသက်မသာနဲ့ ကြည့်လို့ သူတို့လည်း ဒီနေ့ အဖို့ ဈေးဦးမပေါက်သေး။ ပူစူးမ လည်း ဖိုးလုံးလို ပေါက်ကွဲလိုက်ချင် ပေမဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတော့ စိတ်ပျက် လက်ပျက်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ ဝိုင်းစိန်မ လည်း ဘေးမှာထိုင် နေပေမဲ့ ဘုရားဖူးတွေ လာမဲ့လမ်းဖက်ကို မျှော်ငေးလို့။ ပူစူးမ ကောင်းကင် ပေါ်မော့ ကြည့်လိုက် တယ် နေက တော်တော် ကို မြင့်ပြီး မွန်းတည့်တောင် ရောက်တော့မယ်။ လွယ်ထားတဲ့ လွယ်အိတ် ညစ်နွမ်းနွမ်းလေး ထဲကို ငုံကြည့်မိတော့ လွယ်အိတ်ထဲက ရာတန်လေး ၂ရွက် နဲ့ ၂၀ တန်လေး ၅ ရွက် က ပြောင်လှောင်ကာ ပူစူးမကို ပြန်ကြည့်နေကြတယ်။ ဒါက ဝယ်သူကို ပြန်အမ်းဖို့ အတွက် အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ။
“ လူတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ကျပြီလည်းဟာ…” ဝိုင်းစိန်မ ခပ်ညီးညီးလေသံကို ဖိုးလုံးက နားကလောပြီး “သေပြီ..သေကုန်ကြပြီ” လို့ ထပြောတာ နဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ရန်စောင်ပြန်ရော။ “တော်ကြဟာ .. နင်တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း ဈေးဝယ်မလာလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ကြားထဲ.. ” ပူစူး ကြားထဲက ဝင်ဟောက်လိုက်မှပဲ ဝိုင်းစိန်ရဲ့ မျက်စောင်း က ဖိုးလုံး မျက်နှာပေါ်က ခွာတော့တယ်။ သူတို့ ထဲမှာ ပူစူးမ က အကြီးဆုံး။ ပူစူး ပြီးတော့ မှ ဖိုးလုံး၊ ဝိုင်းစိန် ကတော့ အငယ်ဆုံးပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကြီးတယ်ငယ်တယ် ဆိုတာ သူတို့ကြားမှာတော့ မရှိ ဒီလိုပဲ နင်ရယ် ငါရယ်လို့ ပြောရတာ အရသာရှိတော့ ဘယ်သူကပို အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာတောင်မှ ခပ်မေ့မေ့။ ဖိုးလုံးကတော့ ယောင်္ကျားလေးဆိုတော့ အရာရာ သူ့ကို ဆရာတင်ရင် ကျေနပ်နေရော။ ပူစူးတို့ ကလည်းအကြိုက်ပေါ့ ဆရာတင်ပြီးတော့ သူ့ကို ညာခိုင်းပြစ်လိုက်တယ်။ ဟိုကောင်မ ဝိုင်းစိန်မ ဆို အဆိုးဆုံး။ ဟိုနေ့ကလည်း မန်ကျည်းသီး စားချင်တာကို ဖိုးလုံးသစ်ပင်တက်တာ လွှားကနဲ လွှားကနဲ နဲ့ မြန်သလားမမေးနဲ့လို့ မြှောက်ပင့်ပြီး ဒွေးလေးစိန် တို့ ခြံဝိုင်းရှေ့က မန်ကျည်းပင်ကို တက်ခိုင်းတာ မန်ကျည်းကိုင်းခြောက်ပေါ်နင်းမိပြီး ကံကောင်းလို့ ဖိုးလုံး ကျမသေတာ။ ဒါတောင် ဖိုးလုံးတို့က လေမလျော့ သူလျင်လွန်းလို့ အပေါ်ကိုင်းကို ဆွဲမိတာလို့ လေကျယ်နေသေးတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ သူတို့သုံးယောက်က သွားအတူ လာအတူ ဈေးရောင်းလည်းတူတူပဲ။ ဈေးဝယ်သူကို လည်း ဘယ်တော့မှ လုပြီးမရောင်းဘူး။ ဈေးဦး မပေါက်သေးတဲ့သူကို ပေါက်ပြီးသူက အမြဲညှာလေ့ ရှိတယ်။ သူတို့ထဲမှာတော့ ဘယ်သူမှ သာတယ်နာတယ် မရှိဘူး မနာလိုတာလည်းမရှိဘူး ဖြူဖြူစင်စင်ပဲ။ သူတို့ သုံးယောက်မှာ တူညီတဲ့ ဘဝရုန်းကန်မှုတွေရှိတယ် အဲဒါကတော့ ဒီ ရွှေစည်းခုံဘုရား မှာ ပုဂံ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပို့စ်ကတ်လေးတွေ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်တွေကို ရောင်းချပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြခြင်းပဲ။ နေထွက် ကနေ နေဝင်ချိန်ထိ ဒီရွှေစည်းခုံ ဘုရားမှာ ပူစူးမတို့ သုံးယောက်ကို တွေ့ရမည်သာ။ မပြောင်းလွဲ တဲ့ ဈေးခေါ်သံ လေးတွေ နဲ့ အတူ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ဧည့်သည်တွေကို ကျက်မှတ်ထားသမျှ ရွတ်ပြနေတတ်တဲ့ သူတို့ကလေးတွေ မှာ တူညီတဲ့ မိသားစု ဝမ်းရေးပြဿနာတွေလည်း ရှိသေးရဲ့။
သူတို့ သုံးယောက်လုံးက ဝက်ကြီးအင်းရွာမှာနေတယ် ရွှေစည်းခုံဘုရားနဲ့ တော့သိပ်မဝေးဘူးပေါ့။ ပူစူးမ မှာက အမေ မရှိတော့ အဖေရယ် အဖေ့နောက်မိန်းမရယ် သူဖက်ကပါလာတဲ့ သား တယောက်ရယ် အတူတူနေတယ်။ ပူစူး အဖေ က ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ဌက်ခတ်တယ် အဖေ့ မိန်းမက ယွန်းထည်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံ မှာ သူ့သားက တော့ ညောင်ဦးဈေးထဲက ဆိုင်တဆိုင်မှာ အကူအလုပ်လုပ်တယ်။ ပူစူးမ က ဒီရွှေစည်းခုံ ဘုရားမှာ ပို့စ်ကတ် ရောင်းတယ်။ အဖေနဲ့ ပူစူးက လွဲလို့ ကျန်နှစ်ယောက် က နှစ်ပတ် တခါ မှလုပ်ခရတယ်။ ဒီတော့ အဖေနဲ့ ပူစူး တနေ့လုပ်တဲ့ ဝင်ငွေက အိမ်ထောင်တခုလုံး တနေ့စားဖို့။ ဒီနေ့ အဖေ နေမကောင်းလို့ ဌက်သွားမခတ်နိုင် ဒီတော့ ပူစူး ဈေးရောင်းကောင်းမှသာ နောက်နေ့ အတွက် ဆန်ဝယ် ဆီဝယ် လုပ်လို့ရမှာ။ ဖိုးလုံးကတော့ အဖေရော အမေရော မရှိတော့ ဖိုးအေ မမာသည်ကြီးနဲ့နေတာ။ ဆိုတော့ ဖိုးလုံးက ပူစူးထက်ကို ပိုပြီး နေ့တွက်ကိုက် ဖို့လိုတယ်။ အားလုံးထဲမှာတော့ ဝိုင်းစိန် က ပူစူးတို့လောက် ပြာပြာသလဲ နေ့တွက် ကိုက်ဖို့ စိတ်ပူနေစရာ မလို။ ဝိုင်းစိန်က အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ အဖေရော အကိုကြီးတယောက် ပါရှိသေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖေက ဟိုးတလောကမှ ရေချိုးမှားတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး မမာတာ ခုထိကို အလုပ်မဆင်းနိုင်သေးတော့ ဝိုင်းစိန်မ ရဲ့ လုပ်စာလည်း သူတို့အိမ်အတွက် လပ်တလော အဆင်ပြေဖို့ လိုအပ်နေ သည်။ သူတို့ သုံးယောက်မှာ နောက် တခုတူညီနေတာက သူတို့ အားလုံး ကျောင်းမနေခြင်းပင်။
ပူစူးမ ဟိုဒီ တွေးတောရင်း က ဖိုးလုံး နဲ့ ဝိုင်းစိန်တို့ အော်ဟစ်သံ ကြောင့် လန့်ဖြန့်ပြီး ဒီမျောက်နှစ်ကောင် ဘာဖြစ်လည်းလို့ ကြည့်လိုက်မိတော့ ဝိုင်းစိန်က ပြေကျနေတဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်းကို ကိုင်ပြီးငိုနေတယ် ဖိုးလုံးက သာအောင် ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ လည်ပင်းအင်္ကျီစကိုဆွဲထားပြီး မျက်နှာတည့်တည့်ကို သေချာချိန်ပြီး လက်သီးနဲ့ထိုးမယ်လို့ပြင်နေတယ်။ ရန်ဖြစ် နေတာကိုတွေ့တော့မှ ပူစူးမ သတိဝင်လာပြီး “ဟဲ့ ဟဲ့ ဘာဖြစ်တာလည်း.. တော်တော့ ဖိုးလုံးလွတ်လိုက်…ဟဲ့ ဟိုကောင်မ ဝင်ဆွဲလေ ငိုမနေနဲ့ …” ပူစူးမ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြား အတင်းဝင်ပြီး ဖိုးလုံးကိုယ် ကိုတွန်းထုတ် မှ သာအောင်ခင်မျာ နာသွားတဲ့ လည်ပင်းကို ပွတ်ရင်း ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတယ်။ သာအောင် က ပူစူးမ တို့လိုပဲ ပို့စ်ကတ်ရောင်းတဲ့ ကောင်လေး ဒီ ရွှေစည်းခုံဘုရား မှာ ပူစူးတို့ အပြင် ပို့စ်ကတ်ရောင်းတဲ့ တခြား ကလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ ပူစူးတို့ သုံးယောက်ကသာ ဒီနေရာမှာ ရောင်းတာကြာနေပြီ ဆိုတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်လိုဖြစ်နေတာ။ နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ အဲဒီ သာအောင် ဆိုတဲ့ကောင် အဆိုးဆုံး သူက ဈေးလည်းလုရောင်းတတ်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ညှာရကောင်း မှန်းမသိ သူဈေးဦးပေါက်ပြီးလည်း လုရောင်းနေတာပဲ။ ခုလည်း ဝိုင်းစိန်မ ထိုင်နေတာကို ဘေးကဖြတ်သွားရင်းနဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်းကို လက်နဲ့ ဆွဲသွားလို့ ဖိုးလုံးနဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတာ။ ဖိုးလုံးကလည်း ပူစူးတို့ သုံးယောက်ထဲမှာ သူက ယောင်္ကျားလေးဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေကို ကာကွယ်ပေးရတဲ့ တာဝန်ကို ဘယ်သူမှ မပေးပဲ ကျေကျေနပ်နပ် တာဝန်ယူထားသူဆိုတော့ သာအောင် နဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့။
အော် ဒီနေ့မှပဲ ဘုရားဖူးတွေကလည်း နည်းလိုက်တာနော်…ပူစူးစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်။ ဘာလို့ ဧည့်သည် တွေနည်းသွားလည်းဆိုတာ အဖေ့ကို ဟိုကျောင်းဆရာလေး ပြောတာတော့ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သည်တွေ အရင်ကလောက်မလာတော့လို့တဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတာတော့ ဆရာလေးက မပြောသွားလို့ ပူစူးလည်း မသိလိုက်ဘူး။ အရင် က ဒီလို ဆောင်းရာသီဆိုရင် ကမ္ဘာလှည့်တွေ ဘုရားဖူးတွေ အတော်လာတာ။ ပူစူးတို့ တောင်မှ အင်္ဂလိပ်လို ရွှေစည်းခုံဘုရားသမိုင်းကြောင်းကျက်ထားရသေးတယ်။ ဆရာလေး သင်ပေး တာပေါ့ နားလည်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး နှုတ်တိုက်ကျက်ထားတာလေ။ ဘုရားဖူးတွေ ပို့စ်ကတ်ဝယ် တယ်ဆိုရင် အလကား ဘုရားသမိုင်းကိုပြောပြပေးတာလေ။ နိုင်ငံခြားသားကြီးတွေဆို သဘောကျလွန်းလို့ သူတို့ က ပို့စ်ကတ်တွေလည်း ကလေးအားလုံးဆီက ဝယ်တယ် ပူစူးတို့ကို ချော့ကလက်တွေတောင် ပြန်ကျွေးသွားသေးတာ။ ပူစူးတို့လည်း သူတို့ကို ဘုရားသမိုင်း ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောပေးလိုက်တယ်။ အမယ် ပူစူးက အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက်ပီတယ်ဆိုပဲ သူတို့အချင်းချင်း ပြောတာကို ဧည့်လမ်းညွှန်မမ ပြန်ပြောပြတာလေ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပူစူးတို့တွေ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဒီလောက်လည်း ငွေရဖို့ စိတ်မပူရဘူး။ အိမ် မှာလည်း ဒီလောက် မကျပ်တည်းဘူး၊ အရင်က များလှပြီလို့ထင်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဆန်သွားဝယ် တပြည်တောင် မရတော့ဘူး။ ပူစူး က ကလေးပေမဲ့ ဆန်ဈေး တွေ တက်တက်လာ တာတော့ သတိထားမိတယ်လေ။ နေ့တိုင်း ဈေးရောင်းကပြန်ရင် နောက်နေ့ချက်ဖို့ ဆန်ဝယ်ပြီးမှ အိမ်ကိုပြန်ရတာကိုး။
“ဟေး……ပူစူးမ ..နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေလာနေပြီဟ … ” ဖိုးလုံးရဲ့ ဝမ်းသာအားရအော်သံ အဆုံး ပို့စ်ကတ်ရောင်းမယ့် ကလေးတွေရော ဘုရားသမိုင်းကြောင်းပြောပြမဲ့ ကလေးတွေရော အားလုံး အပြိုင်အဆိုင် ဧည့်သည်တွေ တက်လာနေတဲ့ စောင်းတန်း ဘက်ကို ပြေးကြလေရဲ့။ ဟိုကျတော့ ဧည့်သည်က ထင်ထားသလို အုပ်စုနဲ့ လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ မဟုတ် လူလေး ၅ ယောက် နဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်မမ တယောက်။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်မမ က ပူစူးတို့နဲ့ မျက်မှန်းတမ်းမိပြီးသား ဒီတော့ သာအောင်တို့ အုပ်စု ရှေ့က ကာစီးကာစီး လုပ်နေတာတောင် သူတို့ဆီမှာ မဝယ်ပဲ ပူစူးတို့သုံးယောက် ရပ်နေတဲ့နားကို သူ့ဧည့်သည်တွေ ခေါ်လာနေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ ပါးစပ်က ပူစူးတို့နားမလည်တဲ့ စကားသံ လုံးလုံးထွေးထွေး နဲ့ သူ့ဧည့်သည်တွေကို ပြောပြနေတယ်။ ပြီးတော့ ပူစူးတို့ဆီကိုလျှောက်လာကြတယ်။ ဝိုင်းစိန်မ ကလည်း သူ့ အရပ်ပုပုလေး ကို ခြေဖျားထောက်ပြီး လက်ကပို့စ်ကတ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်ကို ဧည့်သည်တွေ မတွေ့တွေ့ အောင် မြှောက်ပြနေတယ်။ ပူစူးလည်း အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ဧည့်သည် မိန်းမကြီးတယောက်က အံသြတဲ့မျက်နှာဖြစ်သွားပြီး ပူစူးဆီက ပို့စ်ကတ်တွေ အများကြီးဝယ်တယ်။ ဖိုးလုံး နဲ့ ဝိုင်းစိန် ဆီကလည်း ဝယ်နေတယ်။ ဖိုးလုံးကလည်း သူ့ရဲ့ ဘယ်လို ပြောပြော မသာယာနိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်သံကြီး နဲ့ ရွှေစည်းခုံဘုရား သမိုင်းကြောင်း ကို စရှင်းပြနေတော့တယ်။
ဈေးဦးပေါက် အနေနဲ့ တော့ ၁ ထောင်ကျော်လောက်ရလိုက်တယ်။ ပူစူးလည်း နည်းနည်းတော့ စိတ်အေးသလိုလို ရှိသွားတယ်။ ဟိုကောင် ဖိုးလုံး နဲ့ ဝိုင်းစိန်လည်း မဆိုးဘူးထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဧည့်သည်တွေ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားဧည့် သည်တွေ မလာတော့ဘူး။ ဘုရားဖူးယာဉ်တွေနဲ့တော့ လာကျပါတယ် ဒါပေမဲ့ စောင်းတန်းထဲက ဆိုင်တွေမှာပဲ ဝယ်လာကျတော့ ဘုရားပေါ်ရောက်တော့ ပူစူးတို့ဆီက မဝယ်တော့ဘူးပေ့ါ။ ဒီလိုနဲ့ ညနေစောင်းတဲ့ အထိ ကြိုးကြားကြိုးကြားပဲ ရောင်းရတော့တယ်။ ညနေ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တော့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ ရောင်းရတဲ့ငွေ ၂ ထောင်ကျော်လေးပဲရသေးတယ်။ ပူစူးမ စိတ်ညစ်သွားတယ် ဒီငွေနဲ့ ဘယ်လို ဆန်နဲ့ ဆီ ဝယ်ရမလည်းဆိုတာ မစဉ်းစားနိုင်အောင်ပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်ကတော့ ရောက်လာပြန်ပြီလေ။ ဖိုးလုံး နဲ့ ဝိုင်းစိန်လည်း နေ့တွက်တော့ ကိုက်ပုံမရ။ ဖိုးလုံးမျက်နှာ သုန်မုန်နေတာကိုကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ “ကဲ…အိမ်ပြန်ကျရအောင် ဒီချိန်ကျမှတော့ ဘယ်သူမှလည်း ဘုရားလာဖူးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး..စောင်းတန်းထဲက ဆိုင်တွေတောင် ပိတ်ကုန်ပြီ” ပူစူး က ပြန်ဖို့နိုးဆော်မှ ပဲ သူတို့သုံးယောက်သား ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ကနေထလာဖြစ်တော့တယ်။
အိမ်ပြန်တဲ့ လမ်းမှာ မနက်က ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်မမ ကို ထပ်တွေ့သေးတယ် သူတို့ကတော့ ပူစူးတို့ ကို မမြင်ပါဘူး။ ဧည့်သည်တွေလက်ထဲမှာလည်း မှန်ပြောင်းတွေ၊ ကင်မရာတွေနဲ့။ သူတို့ ရွှေစည်းခုံဘုရားနားက ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူး ဆီကိုသွားနေကြတာပဲ။ သူတို့ ပုဂံ ရဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာကို ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူး ကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ဝင်လုဆဲဆဲနေလုံးကြီးပတ်လည်က ပုဇွန်ဆီရောင်တိမ်တိုက်တွေရယ် ဧရာဝတီမြစ်ထဲက လှေငယ်လေးတွေရယ်ဟာ သေသပ်လှပစွာ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတချပ်လိုပါပဲ။ ပုဂံရဲ့ ဆည်းဆာ ကို တန်ဖိုးထားစွာနဲ့ ကြည့်လိုကျတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ကြည့်ဖူးပြီးတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ဘယ်လောက်များပြီလဲ။
ဆည်းဆာဆိုတာ နေ့တနေ့ကုန်ဆုံးပြီး ညဥ့်ဦးယံမလာခင် အချိန်ပိုင်းလေး အကူးအပြောင်းကာလတခု။ ဧည့်သည်တွေ အတွက်တော့ ကြည်နှုးရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ ပူစူးတို့အတွက်တော့ ဆည်းဆာဆိုတာ နောက်ထပ် ရုန်းကန်မှုတခုရဲ့အစ၊ နေ့သစ်ကိုရောက်ဖို့ အတွက် သန္ဓေတည်ရာ၊ ပင်ပန်းမှုတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံ။ သေချာတာတခုကတော့ ပူစူးမတို့ ဆည်းဆာနဲ့ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေ ရဲ့ ဆည်းဆာ အမြင်တူပေမဲ့ ခံစားချက် တွေ မတူညီကြတာပါပဲ။
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်၊ ၂၀၀၈
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 10:55 AM 10 comments
သူခိုး ပေးပို့ လိုက်တဲ့ စာလေးတစောင်
သတင်းတိုလေးတပုဒ် ဖတ်မိပြီး သဘောကျလို့ ပြုံး၊ ပြုံးမိရာကနေ ဖြန့်တွေးကြည့်ရင်းနဲ့ ဒီစာလေးကို ရေးဖြစ်သွား တယ်။ သတင်းလေးက BBC News မှာပါတဲ့ သတင်းလေး အကြောင်းအရာက ဆန်းတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ။
“ဆိုင်ရှင်ထံသို့ သူခိုးမှ တောင်းပန်စာ ပေးပို့”
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဘရစ်စတောလ်မြို့ရှိ အိန္ဒိယကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင် အီမရန် ဟာမက်ဟာ ထူးခြားတဲ့ တောင်းပန်စာ တစောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး။ စာနဲ့ အတူ အင်္ဂလန် ပေါင်စတာလင် ၁၀၀ ကိုပါလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ စာပါ အကြောင်းအရာက…..
“ လေးစားရပါသော ဆိုင်ရှင်ခင်ဗျား ကျွန်တော်ဟာ ဒီစာကို နောင်တရခြင်းများစွာနဲ့ ရေးသားလိုက်တာပါ။ တချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ ခင်ဗျားဆိုင်က ဆေးလိပ် အလိပ် ၄၀၀ ကို ခိုးယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီစာနဲ့ အတူ ပူးတွဲပါ ပေါင်စတာလင်ငွေ ၁၀၀ ဟာ အဲဒီ ခိုးယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဆေးလိပ် ၄၀၀ ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ညီမျှတဲ့ငွေဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ် တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ ဆေးအလွန် အကျွံ့စွဲနေသူတယောက်ဖြစ်နေပြီး တညမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ဆိုင်နားကို ဖြတ်လျှောက်မိတုန်း ဆိုင်ကို တခြားတဦး ဖေါက်ထွင်းထားတာတွေ့ပြီး ပျက်စီးလို့ဟနေတဲ့ တံခါးကနေ ဆိုင်ထဲကို ဝင်ရောက်ခါ ဆေးလိပ် အလိပ် ၄၀၀ ကို ကျွန်တော်ခိုးယူခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဆေးဖြတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝကို ရိုးသားကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အတိတ်က မိုက်ပစ်တွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်းမှာ ကျွန်တော့်မှာ နောင်တရလို့မဆုံးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီအပြစ်တွေကို ဖျောက်ဖျက်လို့ ရအောင် ဒီတောင်းပန်စာနဲ့ အတူတူ ကျွန်တော် ခိုးယူခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးငွေသားကိုပါ ခင်ဗျားဆီပို့လိုက်ရတာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ ပစ္စည်းတွေပျောက်သွားလို့ တချိန်က ခင်ဗျားခံစား ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ အတွက် ဒီစာနဲ့ အနည်းငယ်မျှလောက်သက်သာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်အထူးပင် ဝမ်းမြောက်မိမှာပါ ခင်ဗျာ။ ”
စာပါအကြောင်းအရာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အီမရန် ဟာမက် ကတော့ သူလက်ခံရရှိတဲ့ ပေါင်စတာလင် ၁၀၀ ကို မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကုသရေး ရံပုံငွေ အဖြစ်လှုတမ်းလိုက်မယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ကဲ သတင်းဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးမိသွားပြီလား။ သူတပါးရဲ့ ချွေးနည်းစာကို ခိုးယူတာဟာ ရေသာခိုအချောင်လိုက် သမားတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ပါ။ လောကမှာ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်နဲ့ သူများရှာထားဖွေထား တဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်မသိ အောင်ခိုးယူခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စာရိတ္တ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဘိုးချ လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်သတင်းထဲကလို သူခိုးမျိုးကတော့ တော်တော့ကို ရှားပါးတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ သူဟာ အမှားကို အမှားမှန်းသိပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပြုပြင် လိုက်နိုင်တယ်။ သူများပစ္စည်းကို အလကားယူမိခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း နောင်တရကာ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း တနှံ့နှံ့ခံစားနေရပြီး မနေနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ တောင်းပန်စာရေး လိုက်တာပါ။ သူဒီစာကို မရေးရင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူက ခိုးသူဘယ်ဘယ်ဝါဆိုတာ သိတောင်သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူခိုးရဲ့ တချိန်က မိမိကျူးလွန်လိုက်တဲ့ အမှုအပေါ် ဝန်ခံလိုစိတ်၊ တာဝန်ယူလိုစိတ်၊ ခိုးယူမိတဲ့ပစ္စည်း အတွက် ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်သောကကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နဲ့ အတူ သူတပါးပစ္စည်းကို အချောင်မရယူ လိုတဲ့ စိတ်ထားကောင်းလေးတွေကို သတင်းလေးဖတ်ရင်း ဆက်စပ်တွေးမိသွားပါတယ်။ အကယ်၍သာ ဒီ သတင်းထဲက သူခိုးလို စိတ်ဓါတ်ကောင်းလေး သူခိုးကြီးတွေ သူခိုးလေးတွေ အားလုံးဆီမှာသာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခိုးချင်တယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်၊ သူခိုးဆိုတဲ့ စကားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ထင်ပါရဲ့။
နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်၊ ၂၀၀၈
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 1:06 AM5comments
စာရေးခြင်း၊ စာအုပ်များ နဲ့ ကျမ
ကိုအောင်က Cbox ထဲမှာလာရေးသွားတယ်။ ပို့စ်အသစ်တင်မယ်ထင်လို့လာဖတ်တယ်တဲ့။ ဒီရက် အတွင်း ပို့စ် အသစ် မတင်ဖြစ်တာမို့ လာလည်တဲ့သူတွေ ကို အားတောင်နာတယ်။ ကိုယ်က ခုမှ ဘလော့ဂါ လက်သစ်လေးရှိသေးတယ် ဆိုတော့ အသစ်တွေ ဒလဟော ပို့စ်တင်ဖြစ်မယ်လို့ ကိုအောင်ကြီးက ထင်ပုံရတယ်။ တကယ်တော့ စာရေးဖို့ ဆိုတာ ထင်သ လောက်တော့ မလွယ်ဘူး ပထမ အကြောင်းအရာ ကလည်းရှိမှ၊ ဒုတိယစိတ်ကလည်း ကြည်လင်နေမှ၊ တတိယ ကတော့ အကြောင်းအရာလည်းရှိ စိတ်ကလည်းသွင်းမိပြီဆိုပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်း တွေကြောင့် ဟိုဟာလေးထလုပ်ရ ဒီဟာလေးပြေးလုပ်ပေးရ ဖုန်းလာလို့ထပြောရ နဲ့ ခုနက ရှိနေတဲ့ စိတ်လေး ကြက်ပျောက် ဌက်ပျောက် ပျောက်သွားပြန်တာနဲ့ အစက ပြန်လို့ စိတ်ကိုပြန် သွင်းရပြန် ပါရော။ အင်း စာရေးရတာလည်း သူများတွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ ကိုယ့်အတွက်တော့ အတော်ကို မလွယ်ဘူး။
အရင်ကတော့ စိတ်နဲ့ရေးမိ နေတာမှ တပုဒ်ပြီးတပုဒ် အကြောင်းအရာတွေကလည်း ကားစီးလည်းထွက်၊ ရထားစီးလည်းထွက်။ ဒါပေမဲ့ ချရေးလိုက်စမ်းဟေ့ ဆိုမှဖြင့် ဘယ်ကဘယ်လို စရမှန်းကိုမသိ။ ချရေးလို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ရေးမိပြီးတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ခေါင်းစဉ်ပေးဖို့ကြတော့ ခက်နေပြန်ရော။ အဲဒါနဲ့ ရေးလို့ မပြီးတိုးလို့တန်းလှမ်းတွေကလည်း တပုံကြီး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဒီလို ဝတ္ထုတွေဘာတွေ စရေးတာမဟုတ်ဘူး ကာတွန်းပုံလေးတွေ ဆွဲပြီးတော့ စာသားလိုက်ဖြည့်တာပေါ့။ ကောင်မလေးလမ်းလျှောက်ရင်း သီချင်းညီးတယ်ဆိုရင် ကောင်မလေးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံရဲ့ ဘေးမှာ သီချင်းစာသား ကို စကားပြောတဲ့ အကွက်လေးနဲ့ ပေါ့။ အိမ်မှာ အဖိုးက ပန်းချီလဲဆွဲ စာလည်းရေးဆိုတော့ စာရွက်လွတ် နဲ့ ပုံဆွဲ ခဲတံတွေက လက်လှမ်းမီရာမှာ ရှိတော့ ဆော့လည်းဆော့လို့ကောင်း ဆွဲလည်းဆွဲလို့ကောင်း။
ငယ်ငယ်က ကလေးလိုဆော့တာလည်း အစွမ်းကုန်ဆော့တယ်။ သစ်ပင်တက်၊ ထုပ်စီးထိုး၊ ဖန်ခုန်၊ စယ်တောက်၊ ဂုံညင်းဒိုးပစ် စုံလို့ ဗြောင်းဆန်အောင် သောင်းကျန်းတာ။ အဲ မှတ်မှတ်ရရ စာတွေလည်း သည်းသည်းမဲမဲ ဖတ်တာပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့သိတယ် မဟုတ်လား ရွှေသွေးတို့ တေဇတို့ပေါ့ စာအုပ်ပေါင်းချုပ် တောင်ချုပ်ထားလိုက်သေးတယ်။ ဖတ်ပြီးသားလည်း ပြန်ဖတ် ဘယ်တော့မှ မရိုးဘူး အဲဒီတုန်းက ပန်းချီဦးဘကြည်ရဲ့ သရုပ်ဖော် လက်ရာတွေနဲ့ပေါ့ အရမ်းကောင်း အရမ်းကြိုက်ပေါ့။ ကာတွန်းကိုတော့ ကြီးတဲ့ အထိကြိုက်တုန်း မရှက်တမ်း ဝန်ခံရရင် ခုချိန်ထိတောင် ကာတွန်းကားကြည့်တုန်း။ ကာတွန်းဘယ်လောက် ကြိုက်လည်းဆို ထင်းရူးသေတ္တာနဲ့ တလုံးကာတွန်းစာအုပ်တွေစုထားတာ။ တင်အောင်နီ ရဲ့ ပြာလောင်၊ ငွေကြည် ရဲ့ ကမ္ဘာရှား၊ မောင်လွင် ရဲ့ ငထက်ဖြား၊ သစ်ထွဏ်း ရဲ့ မောင်တီထွင်၊ သန်းကြွယ် ရဲ့ ဖိုးဝနဲ့ အင်္ဂါဂြိုလ်၊ အောင်ရှိန် ရဲ့ စိတ်တိုနဲ့ မျောက်ညှိ၊ မောင်ဝဏ္ဏ ရဲ့ သမိန်ပေါသွပ် (အားလုံးစုံအောင် မရေးနိုင်လို့ အကြိုက်ဆုံးတွေ ရွေးရေးတာနော်..)
အင်း .. အသက် ၉နှစ်မှာ စဖတ်ရတဲ့ မှတ်မှတ်ရရ လုံးချင်းဝတ္ထု ကိုပြောရရင်တော့ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ နှစ်လောကတိုက်ပွဲ (ဖတ်ပြီးတော့ ကြောက်လို့ အိမ်နောက်ကိုတောင် အဖော်နဲ့မှ သွားရဲတယ်)၊ နောက်တော့ ဦးထင်လင်းရဲ့ ပေါ်လီယာနာ၊ (သ်ိပ်တော့ အထင်မကြီးပါနဲ့ဦးနော် အိမ်က စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း ရှိတော့ အဲဒီကထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေက အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူရှိနေလို့) နောက်တော့ အိမ်မှာ ရှိတဲ့စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်တွေ တွေ့တာ အကုန်ဖတ်တော့တာပဲ။ အချစ်ဝတ္ထုတွေတော့ အဲတုန်းက စိတ်မဝင်စားသေးဘူး ငယ်သေးတာကိုး။ မှတ်မှတ်ရရ အရမ်းကြိုက်တာ မောင်ထင် ရဲ့ ငဘ မျက်နှာဖုံးမှာ ဇာတ်ကောင် ငဘ က သစ်ပင်ကိုမှီ ခြေထောက်ကိုချိတ် ပြီးဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့ပုံ ဆွဲတဲ့သူကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငဘ ကို ဖတ်တာမှ အခေါက်ခေါက်။ အကြိုက်ဆုံးက ဂျပန်ခေတ်ငွေစက္ကူတွေကို မီးပုံရှို့လိုက်တဲ့ အခန်းကိုပါ။
အဲဒီလိုနဲ့ .. ရှာဖွေဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးကျန်တာက အမကြီးရဲ့ ဝတ္ထုတွေကို တမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ သံသေတ္တာကြီး။ အဲသူကလည်း သူ့စာအုပ်တွေကို တရိုတသေနဲ့ ၂အုပ်ယူဖတ် ပြီးရင် အဲဒီ ၂အုပ်ပြန်ထားမှ အသစ်ထုတ်ပေးတာမျိုး စည်းကမ်းရှိရှိပေါ့။ အရွယ်က ငယ်သေးတော့ ဘယ်ဟာကို သွားကြိုက်လည်းဆိုတော့ ကြူမွေး ရဲ့ အလောင်းဖျောက်တမ်းကစားမယ်။ ကြူမွေး စာတွေက ရီလည်းအရမ်းရီရတော့ သဘောကို ကျလို့။ နောက်တော့ သေတ္တာထဲရှိသမျှ ယုဝတီ ခင်စိန်လှိုင်၊မြတ်ထန်၊ ငြိမ်းကျော်၊ အကုန် ကိုဖတ်ပစ်တာ။ ကျောင်းစာကလွဲရင် ကျန်တဲ့စာအားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာလိုဖြစ်လာရော။ အဲဘယ်ရာသီဥတုကို အကြိုက် ဆုံးလည်းလို့မေးရင် နွေရာသီကို အကြိုက်ဆုံးလို့ မြန်မြန်ကြီးဖြေဖြစ်တယ်။ နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ကျောင်းစာကျက်စရာမလိုပဲ ကြိုက်ရာ စာအုပ်တွေကို ကြိုက်သလိုဖတ်ခွင့် ရှိတာကိုး။
ဒီလို ကျောင်းစာမဖတ်ချင်ဘဲ အပြင်စာတွေဖတ်နေလို့ အမေက ဗြောတင်တာလည်းခန ခန။ နောက်တော့ အတန်းက ရလာတော့ စာတွေများ နဲ့ ဟိုလိုင်းဝင်မှ လူရာ ဝင်တော့ မလိုလို၊ ဒီလိုင်းရသွားရင်တော့ လူဖြစ်ရှုံးတော့ မယ်လိုလို ခေတ်ရေစီးထဲ မျောပါပြီး ကျောင်းစာတွေကျက်ပြီးရင်း ကျက် နေလိုက်တာ အပြင်စာတွေ (ဝတ္ထုတွေနဲ့) ဝေးသွားရော။ ဒါပေမဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များကိုတော့ ဘယ်သူမှလာ သိမ်းပိုက်လို့ မရ။ ဆယ်တန်းလည်းအောင်ရော ကျောင်းတွေ နှစ်ရှည်လများ (ရက်ရှည်မဟုတ်ပါ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ရှည်လများ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အဲဒီ အချိန်တုန်းကစောင့်ခဲ့ရတာ)၊ ဆယ်တန်းအောင် ပြီးတော့ လွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီဆိုပြီး စာအုပ်တွေ ဌားဌားဖတ်။ အိမ်ရှေ့အိမ်မှာ စာအုပ်ဌားဆိုင်ဖွင့်တော့ အဆင်ကို ပြေလို့။ အဲဆိုင်ကပဲ ဂျူး၊ တာရာမင်းဝေ၊ မေငြိမ်း၊ ကြည်အေး၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ အောင်သင်း၊သာဓု၊မင်းလူ၊သုမောင်၊မောင်ဝဏ္ဏ၊ နွယ်ဂျာသိုင်း၊ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီကုန်း)၊ ဖေမြင့်၊ ကိုတာ ဒီလို စာအုပ်တွေကနေ မြစင်္ကြာလို ရှေးဟောင်းဂမီရ စာအုပ်တွေလည်း ရှိတော့ ရေငတ်တဲ့သူ ရေတွင်းထဲကျသလို စာအုပ်တွေကို ဝါးစားသလိုကိုဖတ်ပစ် လိုက်တာ။ ပြီးတော့ မဟေသီ၊ ချယ်ရီ၊ ရှပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ ရွှေအမြူတေ စတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေလည်း ထွက်တာနဲ့ အရင်ဦးအောင်ကို စာအုပ်ဆိုင်က အမကိုပြောထားရတယ်။
ဒါတွေပြောနေတာနဲ့ လိုရင်းပျောက်သွားဦးမယ် ပြောချင်တာက ဒီလို…. ဒီလောက် စာတွေဖတ် ဖြစ်ပေမဲ့ စာရေးဖို့ကြတော့ မလွယ်တာကိုပြောချင်တာ။ စာဖတ်နာတဲ့ သူဟာ ဗဟုသုတကြွယ်သလို စာရေးလည်းကောင်း တယ်တဲ့ ကိုယ့်မှာတော့ စာအုပ်တွေဖတ် စာရေးဆရာတွေကို အားကျလို့ စာရေးမယ်ဆို ချပြီးရေးကြည့်တော့ လည်း အစ သာစထားပြီး ဘယ်တော့မှ အဆုံးမရောက်ခဲ့။ အဲလိုနဲ့ပဲ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ ချောင်ထိုးထားလိုက် ပြန်ရောပေ့ါ။ အင်တာနက် ဆိုတာကြီးပေါ်လာတော့ လေ့လာလျှောက်ဖတ် နဲ့ သူများတွေ ဘလော့တွေကို အားကျ၊ အော် တော်လိုက်ကျတာ ရေးနိုင်လိုက်ကျတာ လို့ အားကျ ကျ နေရုံကလွဲလို့ မယ်မယ်ရရ ချမရေးဖြစ်ခဲ့။ ခုတော့ ဘေးနားက တွန်းအားပေးတဲ့သူလည်းရှိ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်း ဘလော့ တွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်လည်း အင်း ရေးမှ ရေးမှ လို့ အားတင်းပြီးတော့ စာရေးဖြစ်လာတော့ တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က ပြောခဲ့ပြီးသည့် အတိုင်း ကိုယ်တိုင်က ခုမှ စရေးခါစ သူများတွေလို ဟောတပုဒ် ဟောတပုဒ် ရေးလောက်အောင်လည်း လက်ကမသွက်၊ စိတ်ကမထွက်တော့ ပို့စ်အသစ်တင်တာနောက်ကျ၊ ကြန့်ကြာ ဆိုတော့ လာလည်ကြတဲ့သူတွေကို လည်းတောင်းပန်ချင်တာရော။ ကိုယ့်အတွက် လည်းပို့စ် အသစ်တခုရတာ ရောနဲ့ တချက်ခုပ် နှစ်ချက်ပြတ် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ပို့စ်အသစ် တွေ မြန်မြန် များများတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ် ဒါပေမဲ့ မတင်ဖြစ်ရင်လည်းနားလည်မှုပေးပြီး နောက်လည်းမကြာ မကြာ လာလည်ပါဦးလို့ ကိုကို မမ မောင် ညီမလေး ဦလေး ဒေါ်ဒေါ် တွေကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၀၈
(ကိုအောင်ကြီးရေ … ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်ပြီနော်… ဒီလောက်ဆိုကျေနပ်တော့ဗျို့)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:37 PM 8 comments
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်
မဲပေးတယ်ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတွက်တော့ နိုင်ငံသားတာဝန်တရပ်ကို ထမ်းဆောင် တာပါတဲ့။ အရင်က အမေရိကန်နိုင်ငံသားလူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲတို့ မဲပေးတာတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများဟာလည်း လူလတ်ပိုင်း နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုပင်စင်စားတွေပဲများတာပါ။ ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ လူငယ်တွေ နဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက ပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွ မဲပေးခဲ့ ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ တခဲနက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူကတော့ လူငယ်သမတလောင်း (ခုတော့ အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမတ) Barack Obama ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေဟာ စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ဘဏ္ဍရေးလိုငွေပြမှု နဲ့ စစ်ပွဲတွေ ဒါတွေအားလုံးအတွက် ပြောင်းလွဲမှုအသစ်တခုကို အလွန်အမင်း လိုလားတောင့်တ နေကြတာပါ။
အခု သမတသစ်ဖြစ်တဲ့ အိုဘားမားဟာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်း ဂျော့ရ်ှဘွတ်ရှ် လက်ထက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးမပြေလည်မှု၊ စစ်ပွဲနှစ်ခု နဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်ရဲ့ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချက်လေးကို တွေ့ရပါတယ်။ မဲပေးပြီးပြန်လာတဲ့ လူတွေကို နိုင်ငံတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အချို့စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ ရေခဲမုန့်ဆိုင်တွေ က ဆုချတဲ့အနေနဲ့ အခမဲ့ကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ မဲသွားပေးတဲ့သူတယောက်ဟာ မဲရုံမှာ မိမိဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရီပါဘလစ်ကန် ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် မဲပေးပြီးသွားရင် “I voted ” ဆိုတဲ့အမှတ်အသားပါ တံဆိပ်ဝိုင်းလေးတခုကို မဲပေးပြီးကြောင်း သက်သေအဖြစ်ရရှိပါတယ်။ အဲဒီတံဆိပ်လေးကို သာပြလိုက် အခမဲ့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီ၊ ဒိုးနပ်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုံတွေ နဲ့ ရေခဲမုန့်တွေကို ဆိုင်တွေက ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကျွေးမွေးတာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ သူတို့ ရဲ့ အနာဂတ်ကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကို သူတို့ကိုယ်စား အဖက်ဖက်ကကောင်းမွန်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ အတွက် သမတရွေးတဲ့ပွဲမှာ သူတို့ဟာ အသည်းကြားက မဲတပြားကို အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံးလို့ သူတို့်သတ်မှတ်ယုံကြည်ထားတဲ့ သမတလောင်းကို မဲပေးခဲ့ ကြတယ်။
အဲဒီနောက် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ကြောငြာလိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း အိုဘားမားကို ထောက်ခံမဲထည့်ခဲ့ သူတွေဟာ သမတအိုဘားမား ရဲ့ အောင်ပွဲဟာ သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလိုပဲ ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ညကနေ နောက်နေ့ လင်းအားကြီးအချိန်အထိ ဝါရှင်တန် ဒီစီမြို့တော်ရဲ့ လမ်းမတွေမှာ ကားတွေ၊ လူတွေဟာ အို-ဘား-မား……အို-ဘား-မား လို့လှည့်လည်ဟစ်ကျွေးရင်း သူတိုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ထင်ထင်ရှားရှားပြခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံအနှံမှာလည်း ဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ လာမဲ့ ၂၀၀၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့မှာ သမတ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ လက်ရှိ ရီပါဘလစ်ကန် သမတ ဂျော့ရ်ှဘွတ်ရှ် ဘက်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လိုက်နာပြီးတော့ သမတသစ်ကို အာဏာလွဲပြောင်း ပေးမယ်လို့လည်း ဂတိပြုပြောကြား လိုက်တယ်။ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အတူတူတွဲတွေ့ရတဲ့ အပြင် အင်မတန်အတုယူစရာကောင်းတဲ့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ပါတီ၊ အသင်းအဖွဲ့ ဆိုတဲ့တဖက်စွန်းရောက်အစွဲတွေမရှိပဲနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အတူတူ လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်။
လက်ရှိသမတက ရီပါဘလစ်ကန်ပါတီဖြစ်လို့ ဒီမိုကရက်ပါတီနိုင်တာကို ညစ်ပြီး ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အာဏာလွဲပြောင်းတာမျိုးလည်းမလုပ်သလို ၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကို မလိုက်နာပဲ အာဏာကိုဆက်လက် ချုပ်ကိုင်တာမျိုးလည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ အာဏာဆိုတဲ့အရာတခုအတွက်၊ ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်အတွက် နဲ့ တိုင်းပြည်တခုလုံးကို နစ်မွန်းအောင်လုပ်လိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူး။ အချိန်တန်လို့ ဆင်းပေးရမဲ့ သူက သမတနေရာက ဆင်းပေးပြီး နောက်တက်ရမဲ့သမတက အိမ်ဖြူတော်ကနေ သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နဲ့ အတူ တိုင်းပြည်ကို စီမံအုပ်ချုပ်သွားမှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ တရားမျှတတဲ့ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဘေးဖယ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားဆဲပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အာဏာလွဲပေးမှာ မဟုတ်သလို၊ ဘယ်သူနဲ့မှ လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ဖို့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ ဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်၊ ငါ့နေရာ၊ ငါ့အာဏာဆိုတဲ့ စိတ်ထားတွေသာ ဖုံးလွမ်းပြီး မျက်နှာပြောင်တိုက်စွာ မိုက်တွင်းနက်နေတုန်းပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေမူကျမ်းကိုလည်း ပြည်သူတွေက ထောက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ ကန့်ကွက်သည်ဖြစ်စေ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် တဖက်သက် ရေးဆွဲ ထောက်ခံ အတည်ပြုထားပြီး။ နောက်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဦးမယ်လို့ ဂတိပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှုရှိမယ် မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ အထူးအငြင်းပွား နေစရာ တောင်မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
မျိုးချစ်စိတ် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဆိုတာ သတင်းစာတွေ၊ တီဗီတွေမှာ ဝါဒဖြန့်ဇာတ်လမ်းတွေ ပြပြနေယုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ တကယ်တိုင်းပြည်ချစ်တယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ မိမိတို့နဲ့ ဝါဒမတူသူတွေ အတိုက်အခံတွေနဲ့ အတူတူလက်တွဲပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် တိုးတက်အောင် အဖြေရှာဆွေးနွေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အားလုံးအဘက်ဘက် ဆုတ်ယုတ်နေပါပြီ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ လက်နက်ချ အညံ့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲ ယိုယွင်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ စေတနာသန့်သန့် သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မှု ဖြစ်လို့ အင်မတန်မှ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူများနိုင်ငံတွေရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ စကားအပေါ် အပြောတင်မဟုတ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို သာဓကယူပြီး အချိန်မနှောင်းခင် သံဝေဂတရားရပြီး မာနတွေခဝါချနိုင်ကြပါစေ။
နိုဝင်ဘာလ ၅ရက်၊ ၂၀၀၈
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 11:23 PM3comments
နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ၂၀၀၈
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:03 PM4comments
ခြေလှမ်းတွေကို သွက်နိုင်သမျှသွက်အောင်လှမ်းရင်းနဲ့ ဈေးထဲရောက်ရင်ဝယ်ရမဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မေ့မသွား အောင် စိတ်ထဲမှာသေချာပြန်ရွတ်နေလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ အရောင်းပါးတော့ နေတောင်အတော်ညိုနေပြီ အိမ်ပြန် နောက်ကျတာကအကြောင်းမဟုတ် ဈေးပိတ်သွားရင်ဒုက္ခ မုန့်လုပ်ဖို့ ပစ္စည်းတွေ မဝယ်လိုက်နိုင် ရင်နောက်နေ့ ဈေးထွက်ရောင်းနိုင်မှာမဟုတ်။ တနေ့ဈေးမရောင်းနိုင်ရင် ဖွားမယ်နုတို့ မြေးအဘွား ထမင်းစားဖို့ကိစ္စ ဒုက္ခရောက် သွားနိုင်သည်။ ညနေစာအတွက်ဟင်းစားလေးလည်း ဝယ်ရဦးမှာဆိုတော့ ဈေးထဲရောက်မှ ဘာဝယ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေရင်ကြာနေဦးမယ်။
စိတ်ကစောလွန်းတာမှ လူထက်အရင်ကိုဈေးထဲရောက်နှင့်နေပြီ ဈေးအပေါက်ဝနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဆန်ဆိုင်မှာ ဆန်ကွဲတပြည်မှာထားတာကို အရင်ဝင်ယူရမယ် ဈေးထဲကထွက်မှဆို ဆိုင်ပိတ်သွားနိုင်သည်။ မုန့်လုပ်ဖို့အတွက် ဒီဆန်ကွဲကအဓိက “ဒေါ်နော်ရေ..ကျွန်မမှာထားတဲ့ ဆန်ကွဲတပြည်..ပေးပါ..”ပိုက်ဆံလည်းရှင်းပေးရင်းနဲ့ မြန်မြန်နှုတ်ဆက်ရသည်။ တော်ကြာ စကားစရှည် နေရင်ဖြတ်ရခက် မှာစိုးရတယ်။ ကဲ ဆန်ကွဲတော့ရပြီ ဒါဆိုစိတ်ချ ရသလောက်ရှိသွားပြီ ကျန်တာတွေက ဘာမှသိပ် အရေးမကြီးတော့။ ဟင်းစားအတွက်ဈေးအဝင်ဝက မမွှေးဆိုင်က ခရမ်းကစော့သီးတပုံရယ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတပုံရယ်ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ငါးပိဆိုင်ကိုသွား ဈေးအပေါဆုံး ရေချိုငါးပိ ငါးကျပ်သားရယ်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်အသေးတထုပ် ရယ်ဝယ်လိုက်တယ်။ ဒါပဲဟင်းစားက သူများတွေလို ငါးတွေ၊ အသားတွေလား.. အောင်မယ်လေး အနားတောင်မသီဝံ့ဘူး…။ တခါတလေတော့လည်း မြေးမလေး ပူစာလွန်းလို့ မအေးသန်းဆိုင်က ငါးဘဲဖြူလေးတို့၊ ကြက်သည်ဒေါ်စန်းဆိုင်က ကြက်ရိုးလေးဝယ်ချက်ပေး ရတာပေါ့။ ဒါကလည်း ဆယ်ခါ့ တခါရယ်။
အဲ.. အဲ ပြောရင်းနဲ့ ထန်းလျက်ဝယ်ဖို့မေ့လာတယ်… တော်သေးတယ်အိမ်ရောက်မှပြန်လာရင် အချိန်မှီတော့မှာ မဟုတ်။ ထန်းလျက်ဝယ်ပြီးပြန်ထွက်တော့ ဈေးဘေးကအပေါက်ကထွက် ဌက်ပျောသီးအုန်းသီးဆိုင်ကိုဝင် အုန်းသီးတစ်လုံးညှစ်ခိုင်း ပြီးနောက်တလုံးကိုအခွံနွှာခိုင်း။ ဈေးနားကမထွက်ခင်လိုတာတွေစုံပြီလားလို့ ဈေး တောင်းကိုသေချာပြန်ကြည့်ရသေးတယ်။ အိမ်ရောက်ပြီးမှလိုအပ်တာမျိူးမဖြစ်အောင်ပေါ့။ အားလုံးသေချာ စစ်ပြီးတော့မှပဲ သူ့ခြေလှမ်းတွေကိုအိမ်ဖက်သွားတဲ့ လမ်းလေးဆီလှည့််လိုက်တယ်။ ဈေးဘေးနားက ဆင်ခြေ လျောလမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်သွားရင် ရထားသံလမ်းကိုတွေ့မယ်။ ဖွားမယ်နုတို့အိမ်ကရထားသံလမ်းကို တွေ့အောင်သာသွားသံလမ်းကိုကျော် ပြီးသံလမ်းအတိုင်းသာအရှေ့ဘက်ကိုတည့်တည့်ဆက်လျှောက်သွားရင် ဖွားမယ်နုတို့ရဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကြီးကိုတွေ့မယ်။ အရင်ကတော့ကျူးကျော်ရပ်ကွက်လေးပေါ့ နောက်တော့ တဲတွေများများ လာတာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ရပ်ကွက်ကြီးတခုလိုဖြစ်သွားတာ။ သံလမ်းရဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်း စည်းခြားထားသလိုကိုကွာတာ ဖွားမယ်နုတို့ဘက်မှာ ကျူးကျော်တဲတွေ၊ ဟိုဘက်ခြမ်းမှာကတိုက်တွေနဲ့ လူကုံတန်ရပ်ကွက်။ လူတန်စားကွာဟမှုကို ဝေးဝေးကြည့်နေစရာမလိုဘူး။ သံလမ်းဟိုဘက်ခြမ်းနဲ့ ဒီဘက်ခြမ်းယှဉ်ကြည့်ယုံပဲ။
ရထားသံလမ်းဘက်ရောက်တော့ မြို့ထဲဖက်ကလာတဲ့ မြို့ပတ်ရထားကြီးတစင်း အိပက်အိပက်နဲ့ လာနေတယ် ရုံးဆင်းချိန်မို့လူတွေကကျပ်သိပ်လို့။ ဈေးနားကဘူတာရုံမှာရပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဆင်းမဲ့လူတချို့ကလည်းအဝမှာ မကြောက်မရွံတွယ်စီးလို့။ ဖွားမယ်နုအတွက်တော့မြို့ထဲဆိုတာ ကိုရောက်ဖို့ကိုနှစ်ပေါက်ရောပဲ မြေးလေးပူဆာ လွန်းမှ ရွှေတိဂုံဘုရား လေးရောက်တာ။ ဒီထက်ပိုပြီး ရန်ကုန်ထဲသွားဖို့ဘာအကြောင်းမှမရှိ ဟုတ်တယ်လေ ဆွေမျိုးမရှိမျိုးမရှိ အဘွားကြီးအိုကြီးအိုမ နဲ့မြေးမကလေး နှစ်ယောက်တည်းအတွက်ကတော့ ဘယ်တွေ များအလည်အပတ်သွားစရာလိုဦးမှာလည်းလို့။ အင်း… မြေးလေးဆိုလို့ ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်တောင်နီးနေပြီ မနှစ်က ဖွားမယ်နု မမာတာနဲ့သူငယ်တန်းကို နှစ်ဝက်နဲ့ထုတ်ထားလိုက်ရတာ အမှန်ဆိုမြေးလေးက သူငယ်တန်း တက်ရမယ့်အရွယ်တောင်လွန်နေရှာပြီ။ လာမယ့်မိုးတွင်းဆို အသက်ကခုနစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဖွားမယ်နုမှာက သမီးလေးတယောက်ထည်းရှိတာလေ မြေးမလေးကိုမွေးရင်းနဲ့ မီးတွင်းထဲမှာတင်ဆုံးတာ အဲ..မြေးမလေးလှမေက ဒီသမီးကမွေးတဲ့ကလေးပေါ့။
သူ့အဖေလား.. ပြောမပြောချင်ပေါင် ကလေးလည်းမသိ သူ့ကိုယ်သူတောင်ဘာမှန်း မသိအောင် မူးရူးနေလို့ မြေးမလေးကိုဖွားမယ်နုပဲ ခေါ်ထားလိုက်ရတာ အဲဒီတုန်းထဲက သူ့ကိုမတွေ့တော့တာ ခုလောက်ဆိုလူ့ပြည်မှာ ရှိချင်မှတောင်ရှိတော့မယ် အဲဒီလောက်ကိုအသောက်ကျူးတာ။ ဖွားမယ်နုရဲ့ အိမ်သားလား အင်းဆုံးတာကြာပြီပေါ့ သမီးလေးအပျိုပေါက်အရွယ်ထဲကပဲ။ ဆိုက်ကားနင်းရင်းမိုးမိတာကို ဂရုမစိုက်မိလို့ အပူကြီးတာနဲ့ သေရှာတာပဲ။ သူရှိတုန်းကတော့နည်းနည်းချောင်လည်တယ် ဒီလိုမျိုး နေပူစပ်ခါးထဲ ဈေးရောင်းနေစရာဘယ်လိုမှာတုန်း သံလမ်းဟိုဘက်က ရပ်ကွက်ထဲမှာပဲ အဝတ်လေးလိုက်လျှော်၊ အကူအညီလိုလို့ခေါ်ခိုင်းရင်သွားလုပ်ပေါ။့ ဒါတွေက ပုံမှန်ဝင်ငွေရတာမဟုတ်တော့ သူလည်းဆုံးရော သမီးတယောက်နဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ဈေးဗန်းခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ လည်ရောင်းရတာပေါ့။ ဘာရောင်းလည်း..ဟုတ်လား..မုန့်ကြာစေ့ရောင်းတာလေ…ခုနကဈေးထဲ ဝင်ဝယ်တာတွေက မုန့်ကြာစေ့လုပ်ဖို့ပေါ့။ ပြန်ရောက်ရင် လှမေကို မနက်ထဲက ရေစိမ်ထားခဲ့တဲ့ ဆန်ကိုသွားကျိတ်ခိုင်းရဦးမှာ။ တော်သေးတယ်ကျိတ်စက်က အိမ်နားတင်ရှိလို့။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မုန့်လုပ်ပြီးလည်ရောင်းတဲ့သူတွေအများသား။ ဒီတော့….မုန့်ကျိတ်ဆုံထောင်စားတဲ့ သူအတွက်က ကိုက်သပေါ့။ ကဲ .. ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲ ရပ်ကွက်ထဲတောင်ရောက်ပြီ။ ဒီမှာတော့ တွေ့ရကြားရပါလိမ့်မယ် ကလေးတွေငိုသံ၊ သီချင်းဖွင့်သံ၊ လင်မယားရန်ဖြစ်သံ၊ အော်သံဟစ်သံ စုံလို့စုံလို့ အိမ်ဝိုင်းတခုရှေ့ဖြတ်သွားတိုင်း အသံတမျိုးဆီကြား ရပါလိမ့်မယ်။
ဟိုးရှေ့ကလမ်းကွေ့ဆိုရင် ဖွားမယ်နုတို့တဲလေးကိုရောက်ပြီ။ တဲရှေ့ရောက်တော့ ခေါင်မိုးကို တချက်မော့ကြည့်ရင်း ဆွေးမြေ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဓနိမိုးနဲ့ ဒီတမိုး ဘယ်လိုစခန်းသွားရမလည်းဆိုတာ တွေးမိပြီးစိတ်ညစ်ပြန်ရော။ ခေါင်မိုးက မိုးရွာတာကာဖို့မပြောနဲ့ နေပူတာတောင်မလုံ။ တဲရှေ့ရောက်တော့ မြေးလေးကိုမတွေ့လို့စိတ်ပူသွားသေးတယ်။ နေ့ခင်းက ကလေးကိုယ်နွေးနေလို့ ဘေးအိမ်ကိုအပ်ခဲ့ပြီး ဈေးသာထွက်ရောင်းရတာ စိတ်ကတော့တယ်မဖြောင့်။ တဲကပြင်ပေါ်ကို ဈေးတောင်းချရင်းနဲ့ တဲထဲကို လှမ်းအော်ကြည့်လိုက်တယ် “မလှမေ…မလှမေ..မြေးလေးရေ” “ရှင်…….” လှမေထူးသံကြားမှပဲ သက်ပြင်းခိုးချလိုက်တော့တယ်။ ဒါတောင် လူကိုမတွေ့ရသေး အသံသာကြားနေရတာ အော်… ကလေးက ထမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာ စာရေးနေသကိုး…။ “မြေးလေး .. ဘာတွေရေးနေတာတုန်းကွဲ့..” ဆိုတော့ “ဝလုံး…” တဲ့ ဒါပဲပြန်ဖြေတယ်။ ဒီကလေးက စကားအင်မတန်နည်းလွန်းတယ် စာလည်းသိပ်လိုချင်တာပဲ မနှစ်ကနှစ်ဝက်နဲ့ကျောင်းထုတ်လိုက်ရပေမဲ့ သူက ကျောင်းကသင်လိုက်တာတွေကို မေ့မသွားအောင် အမြဲလေ့ကျင့်နေတာ…။ လက်ရေးကလည်းလှလိုက်တာမှ ဝိုင်းလို့။ ကကြီး၊ ခခွေးတွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆိုနေတတ်တာ။ ဖွားမယ်နု မြေးလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်း ကျောင်းအပ်ရတော့မှာကို တွေးမိပြီးရင်မော သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ…အဘွားကြီး အိုကြီးအိုမရှာဖွေနေတာ ထမင်းနပ်မှန်နေတာတောင် ကံကောင်း လှပြီ။ ဒီထက်အပြင်ပိုပြီးတော့ ငွေရအောင်မရှာတတ်တော့။
ရေနွေးလေးနည်းနည်းသောက်ရင်းနဲ့ မြေးလေးစာရေးနေတာကိုကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တာ အတော်ကြာတယ်။ နောက်မှသတိရတာနဲ့ “မြေးလေး ဖွားကို ဆန်သွားကျိတ်ပေးဦးနော်..” ဆိုတော့ “ဟုတ်..” ဒါပဲ..ပြန်ဖြေတယ် မြေးလေးက ကလေးဖြစ်ပေမဲ့ ဘာမှသိပ်ပြီးမပူဆာတတ်ဘူး အဲ..သူပူဆာရင်တော့ သူတကယ် ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလိုချင်နေတဲ့ အရာကိုမှပူဆာတာမျုိုး။ ကြည့်နေရင်းမှာပဲ မြေးလေးက ရေစိမ်ထားတဲ့ဆန်ကွဲနဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်တွေကို မုန့်သွားကျိတ်မဲ့အိတ်ထဲပြောင်းထည့်ပြီး တဲလေးပေါ်ကနေဆင်းသွားတယ်။ သူမနိုင် ဝန်ထမ်းသွားတဲ့ပုံစံလေးက သနားစရာချစ်စရာလေး။ မွဲတဲ့ဘဝများ ကိုယ့်သွေးသားလေး တွေကိုတောင် မခိုင်းရက်ပေမဲ့လည်းခိုင်းနေရတာပဲ။ ကဲ … တွေးနေဝမ်းနည်းနေလို့လည်း အပိုပဲ မြေးလေးသွားနေတုန်း ညနေစာချက်လိုက်တယ်…ဗိုက်ကလည်းဆာလာပြီလေ။ ဟင်းကတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြား ချက်နေစရာမလိုဘူး ခုနဈေးကဝယ်လာတဲ့ ငါးပိရေချိုကို ငရုတ်သီးလေးအုပ်ပြီး ငါးပိရေချက်လေးချက် ပုဇွန်ခြောက် ထုတ်လေး ဖေါက်ထည့်။ ဆီတော့မပါဘူးလေ ဆီပုလင်းဆိုတာ ဖွားမယ်နုတို့ မီးဖိုချောင်မှာ ချောင်ထိုးခံထား ရတာကြာပြီ။ ငါးပိအိုးကျက်တော့ ခရမ်းကစော့သီးလေးတွေကို ဓါးနဲ့လေးစိတ်စိတ်လိုက်တယ် ဒါက အတို့ပေါ့။ ဒါပဲ .. ဆီမပါတဲ့ငါးပိချက်က ဟင်း၊ ခရမ်းသီးလေးတွေကတို့စရာ။ ထမင်းကတော့ မြေးလေးချက်ထားလို့ကျက်ပြီး သား။ မြေးကိုထိုင်စောင့်ရင်းနဲ့ ဖွားမယ်နု အမောဖြေနေလိုက်တယ်…မိုးဦးကျတော့မှာမို့ ရာသီဥတုက ပိုပြီးအိုက်စပ်စပ် ရေလေးတစ်မုတ် နှစ်မုတ် လောက်ချိုးလိုက်ချင်သား ဒါပေမဲ့ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်တဲ့ ချိုးလို့တော့မဖြစ်…ဖျားနာ လို့ကတော့ ဈေးမရောင်းနိုင်တဲ့ အပြင် ဆေးဖိုးပါထပ်ကုန်နေမယ်။
ဖွားမယ်နု မီးဖိုပေါ်မှာထန်းလျက်အိုးကြိုနေတုန်း မြေးလေးလည်းမုန့်ကျိတ်ဆုံကပြန်လာပြီ…။ မုန့်သားတွေကိုရော ထန်းလျက်အိုးကိုပါ ခဏဖယ်ထားပြီး မြေးအဘွားနှစ်ယောက် ထမင်းစားလိုက်တယ်။ ညကလည်းမရှိဘူးဆို ခုနှစ်နာရီလောက်တော့ရှိလောက်ပြီ…။ မြေးလေးကတော့ စကားဘာမှ မပြောပဲ ထမင်းကိုသာမဲစား နေတယ်။ ဖွားမယ်နုကတော့ ဒီနေ့ဈေးရောင်းသွားတဲ့ လမ်းတလျောက်က အကြောင်းတွေကိုစီကာပတ်ကုံးပြောနေ လိုက်တယ်။ ပြောစရာဆိုလို့ ဒီမြေးအဘွားနှစ်ယောက်ရှိတာ ဒီလိုမှ မပြောရင် စကားတောင်မပြောတတ်ဖြစ်တော့ မယ်။ မြေးလေးကလည်း တေမိမလေး။ ပြောသမျှကို ခေါင်းညိတ် အင်းလိုက်ယုံကလွဲလို့ ဘာမှဆက်မပြော။ စားပြီးတဲ့ ပန်းကန်တွေကို မြေးလေးဆေးကြောနေတုန်း ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်အတိုလေးကို တဖွာနှစ်ဖွာ ဖွာနေ လိုက်တယ်။ ဆေးလိပ်တော့ ကြိုက်သလားမမေးနဲ့ .. ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုလေးတောင် အကုန်မဖွာရဲဘူး ဈေးကလည်း မနဲဘူးလေ။ ဆေးလိပ်ဖွာပြီးတော့ မုန့်နယ်နေလိုက်တယ် မုန့်ကြာစေ့လုပ်ရင် ကောက်ညှင်းတပြည်ဆို ဆန်ကွဲက တလုံးပေါ့ ဒါမှ မုန့်သားကအိမှာ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း ကောက်ညှင်းကဈေးကြီးတော့ ဆန်ကွဲကို ပိုထည့်ရတာပေါ့။ မုန့်နယ်တော့မှနာနာလေးဖိနယ်လိုက်တယ်…ဒါကဖွားမယ်နုရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူ။ မုန့်နယ်ပြီးတော့ မုန့်လုံးလေးတွေလုံး ရတော့မှာမို့ မြေးမလေးကို လာကူဖို့ခေါ်ရတယ်။ နေ့တိုင်းမုန့်လုံးတဲ့ အချိန်ဆို မြေးလေးကူ နေကျ။ မုန့်လေးတွေကို လုံးပြီးတော့မှရေနွေးထဲကိုထည့်ပြုတ်မှာလေ။ မုန့်ကြာစေ့လေးတွေအရွယ်အစားက မုန့်လုံးရေပေါ် လောက်လည်းမကြီးတော့လုံးရတာလက်တော့ဝင်သား။ “မြေးလေးမုန့်လုံးလေးတွေကိုသေချာလုံး နော်” “မြေးလေး….ဝလုံးဝိုင်းသလိုဝိုင်းဝိုင်းလေးလုံး ဟုတ်ပလား” “ဟုတ်ကဲ့”
မုန့်လုံးလေးတွေပြုတ်ပြီးသွားတော့ ညတောင်တော်တော်နက်ပြီ ခေါင်းရင်းအိမ်ကတော့ တီဗီသံဆူညံနေတုန်း။ ဒါပေမဲ့ ဖွားမယ်နုကတော့ တနေ့လုံးဈေးဗန်းရွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ထားလို့ အကြောတွေတက်ပြီး မျက်လုံးကမှေး လာနေပြီ။ မုန့်တွေကိုစကာခုံးထဲထည့် ပိတ်ပါးနဲ့သေချာအုပ်ပြီးတော့။ ဘုရားရှိခိုးလိုက်သေးတယ် ဒီဝတ်ပြုတာ လေးကိုတော့ အပျက်မခံနိုင်။ မြေးလေးကတော့ ဖျာကြမ်းလေးပေါ်မှာတကိုယ်စာဝင်ခွေနေပြီ ဖွားမယ်နုလည်း ဘုရားကိုဦးချ စောင်ပါးလေးကို ဒူးဆစ်နားထိဆွဲခြုံလိုက်ရင်း မြေးလေးဘေးကနေရာမှာဝင်လှဲ လိုက်တယ်။ မြေးလေးက မအိပ်သေးပဲသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။ ပြီးတော့ဖွားမယ်နုကို မကြည့်ပဲလေသံတိုးတိုးနဲ့ “ဖွား…သမီး ကျောင်းနေချင်တယ်” “သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ဝလုံးရေးတတ်လို့အတန်းတက်သွားပြီ” ဖွားမယ်နု ခပ်ရဲ့ရဲ့ပဲပြန်ပြုံးပြလိုက်နိုင်တယ်။ မှောင်ထဲမှာဆိုတော့ဒီအပြုံးကိုမြေးလေးမမြင်နိုင် “အေးပါ မြေးရယ် … အဖွား အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးပါ့မယ်” ပြောလိုက်တဲ့ ဖွားမယ်နုရဲ့ အသံကခြောက်ကပ်ကပ် ရင်ထဲမှာလည်းထိတ် သွားတယ် မြေးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်လိုက်တာ။ အင်းလေ ခုထက်ပိုပြီးတော့ နည်းနည်းအပင်ပန်းခံပြီး ခေါက်ရေများများဟိုဘက်ရပ်ကွက်ထဲလှည့်လိုက်ရင်တော့ မြေးလေးကိုကျောင်းအပ်ဖို့ ပိုက်ဆံ ပြည့်နိုင်ကောင်းရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကျန်းမာရေးကို သူအားမရ။ နေ့ခင်းလေးတပိုင်းလည်ရောင်းတာတောင် သူ့မှာ ပင်ပန်းလွန်းလှနေပြီ။ အသက်၆၀ကျော်အမယ်အိုတယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုဈေးတောင်း ခေါင်းပေါ်ရွက် လည်ရောင်းတာ သူ့အသက်အရွယ် အနေအထားနဲ့တော့ အစွမ်းကုန်ပဲ။
တွေးရင်းနဲ့ရင်ပူသလိုလိုရှိတာနဲ့ ထမင်းစားပွဲဝိုင်းဆီလျှောက်လာပြီး ရေနွေးလေးတခွက်ငဲ့သောက်လိုက်တယ် အိပ်ရာဆီကိုပြန်လာတော့ မြေးလေးနိုးသွားမှာစိုးလို့ခြေကိုခပ်ဖေါ့ဖေါ့နင်းရတယ် ခေါင်းအုံးပေါ်ပက်လက်လှဲချ လိုက်တော့လည်း မျက်လုံးတွေက ကြယ်မြင်လမြင်ခေါင်မိုးကိုတွေ့ပြန်ရော။ အိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစားဖို့ မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်တယ် စိတ်ကတော့ဂနာမငြိမ်စွာနဲ့ဆက်စဉ်းစားနေတုန်း။ အိမ်မိုးဖုိ့၊ မြေးလေးကျောင်း ထားဖို့၊ ……၊ ………..။ စိတ်ကသာစဉ်းစားနေပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့။ အိပ်မောကျ လုလုမှာ မြေးလေးယောင်လိုက်တဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်ရတယ် “ဝလုံးရေဝ… ဝ..ရေဝ….” … မြေးလေးကိုကျောခိုင်းပြီး တစောင်းလှည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ မျက်လုံးထောင့်မှာစိုစွတ်တဲ့စီးကြောင်းတခု စီးဆင်းသွားတာကို သတိထားလိုက်မိရင်း ငြိမ်သက်စွာ အိပ်မောကျသွားတော့တယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁ရက်၊ ၂၀၀၈
(တောင်းပန်စကား - ပထမတုန်းကဒီပို့စ်ခေါင်းစဉ်လေးကို ဝါရေ...ဝ လို့ပေးထားတာပါ။
ဆိုပြီးသင်ပြပေးတာနဲ့ ဝလုံးရေ...ဝ လို့ အမှန်ပြင်လိုက်ပါကြောင်း)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 8:42 AM 10 comments